YEYINTNGE(CANADA): Friday, July 04
အိုးဝေသံတညံညံနဲ့ အမြီးကော့ရင်မော့လို့ နယ်ချဲ့တိုက်ပွဲစခဲ့တဲ့နေရာ......
ကျောင်းသားထု ရပိုင်ခွင့်ကို တောင်းဆိုပေးတဲ့နေရာ......
ဘယ်သူ့မှဒုက္ခမပေး ငွားငွားစွင့်စွင့် ဂုဏ်ယူစရာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းဝင်အဆောက်အဦးတခု.......
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 7/04/20080အကြံပြုခြင်း
စစ်အစိုးရ၏ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံနေရဆဲ ချစ်သူ မနိုဘယ်အေး၏ ကွန်ပျူတာထဲမှ ဓာတ်ပုံကို ကြည့်ရှုနေသော ပြည်ပရောက် ကိုတင်အေး (ဓာတ်ပုံ - ဧရာဝတီ)
ကျော်စွာမိုး/မဲဆောက် ဇူလိုင် ၄၊ ၂၀၀၈
နှလုံးသားရေးထက် နိုင်ငံ့အရေးကို ရှေ့တန်းတင်ခဲ့ကြသည့် ချစ်သူနှစ်ဦး၏ ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်းတပုဒ် ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံ့အရေးကို ရှေ့တန်းတင်လှုပ်ရှားခဲ့သောကြောင့်လည်း တဦးကထောင်ထဲ၊ တဦးက စစ်အစိုးရ၏ ရန်မှ လွတ်ကင်းရာပြည်ပ တွင်…။ အဝေးကြီး ဝေးနေကြရသည်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့ကတော့ ခိုင်မြဲစွာ ချစ်နေကြဆဲပင်။ နိုင်ငံရေး တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူများ အချင်းချင်း မေတ္တာမျှမိလျင် ဖြစ်တတ်သည့် ဇာတ်လမ်းများထဲမှ ဇာတ်လမ်းတပုဒ်ဟု ဆိုရပေလိမ့်မည်။ ချစ်သူများမှာ နိုင်ငံ၏ အကြောင်းမလှသော အခြေအနေ၌ ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခံရ၍ ဖြစ်စေ၊ ပြည်ပသို့ ထွက်ပြေးကြရ၍ ဖြစ်စေ ၀မ်းနည်းကြေကွဲဖွယ် မဆုံဆည်းနိုင်ကြရပေ။
အံ့သြစရာမှာ သူတို့၏ အချစ်က အလွန်ခိုင်မြဲပြီး သူတို့၏ ဘ၀များအတွင်း နက်ရှိုင်းစွာ နေရာယူ ထားသည့် အချက်ပင် ဖြစ်၏။
၂၀၀၇ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့က သူတို့၏ ချစ်သူ သက်တမ်း တနှစ်ပြည့်ခဲ့သည်။ အဲဒီနေ့ကပင် ကိုတင်အေးက မနိုဘယ်အေးကို “ကိုယ့်ကို တကယ်ချစ်ရဲ့လား ” ဟု မေးခဲ့ရာ “ချစ်တာပေါ့” ဟု ရှက်ရွံ့စွာ ပြုံး၍ ပြန်ဖြေခဲ့သေးသည်။
၎င်းအဖြေစကားလေးက သူ့ဘဝ အတွက် ယခုထိ စွဲထင်ကျန်ရစ်မည့် ချိုမြိန်ဖွယ် အမှတ်တရ တခု ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟု ထိုစဉ်ကတော့ သတိမပြုမိခဲ့သေး။ သို့သော်လည်း ထိုစကားလေးမှာ ကိုတင်အေး နောက်ဆုံး ကြားခဲ့ရသည့် ချစ်သူ၏ အသံလေး ဖြစ်သွားခဲ့သည်။
နောက်တနေ့တွင် မနိုဘယ်အေး၏ အိမ်ကို စစ်အာဏာပိုင်များ ၀င်ရောက်စီးနင်းရှာဖွေခဲ့ပြီး သူ့ကို ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တော့သည်။
ကိုတင်အေးမှာ ရန်ကုန်တွင် လအနည်းငယ်ကြာ ဆက်နေသေးသော်လည်း ပြည်တွင်းတွင် နိုင်ငံရေး ဆက်လက် လှုပ်ရှားရန် အန္တရာယ်အလွန်ကြီးကြောင်း သဘောပေါက်လာသဖြင့် အိမ်နီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံသို့ သွားတော့မည်ဟု ဆုံးဖြတ်ချက် ချခဲ့ရတော့သည်။
ကိုတင်အေးကော အသက် ၃၃ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သည့် ချစ်သူ မနိုဘယ်အေး (ခေါ်) မနှင်းမေအောင် ပါ မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် ခိုင်ခိုင်မာမာ သံန္နိဌာန်ထားရှိသူများ ဖြစ်ကြပြီး သူတို့ နှစ်ဦး၏ အချစ်ရေးထက်ပင် ပို၍ လေးနက်စွာ ရှေ့တန်းတင် ထားသူများ ဖြစ်ကြသည်။
မနိုဘယ်အေးမှာ ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် ပထမအကြိမ် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ထောင်အတော်များများ သို့ ပြောင်းရွှေ့ ထိန်းသိမ်းထားခံခဲ့ရသည်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်တွင် နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုများ တက်ကြွစွာ လုပ်ဆောင်နေသောကြောင့် သူ့အမေပါ ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရသည်။
ကိုတင်အေးက ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် ဖမ်းဆီးခံရပြီး ထောင်ဒဏ် အနှစ် ၂၀ ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရသည်။ အင်းစိန်ထောင်တွင် ထောင်ကျနေစဉ် ပထမနှစ်တွင်ပင် ယခင်သူ၏ ရည်းစားဟောင်းက အဆက်ဖြတ်သွားခဲ့ တော့သည်။ “ကျနော်တို့ ဘ၀တွေကတော့ ဒီလိုပါပဲဗျာ” ဟု ကိုတင်အေးက ပြောပြသည်။ ထောင်ထဲတွင်သူ ၁၆ နှစ်တာ နေခဲ့ရ၏။
မနိုဘယ်အေးကော ကိုတင်အေးပါ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာကြသည်။ နောက်တနှစ်တွင် သူတို့ နှစ်ဦးစလုံး ရန်ကုန်ရှိ မဂ္ဂဇင်းတိုက်တခုတွင် အယ်ဒီတာအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်ကြရင်း စတင် ဆုံတွေ့ခဲ့ကြသည်။ မနိုဘယ်အေးမှာ ထိုအချိန်က ဒဂုံတက္ကသိုလ်တွင် ရူပဗေဒဘာသာရပ်ကို သင်ယူလေ့လာနေသည့် ကျောင်းသူဖြစ်သည်။
သူတို့နှစ်ဦး၏ နိုင်ငံရေးခံယူချက်၊ လှုပ်ရှားမှုအတွင်း အတွေ့အကြုံများနှင့် ထောင်တွင်းအတွေ့အကြုံများ ကြောင့် အချိန်အနည်းငယ်အတွင်း ပို၍ နီးစပ်လာခဲ့သည်။ တဦးနှင့် တဦး နှစ်နှစ်ကာကာ စုံမက်မိကြ ခြင်းမှာလည်း တဦး အပေါ်တဦး အပြန်အလှန် လေးစားမှုနှင့် ယုံကြည်မှုတို့ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရာ ရှိပါသည်။
သူတို့ချစ်ခြင်းကို ခွဲနိုင်သည့် တခုတည်းသောအရာမှာ စစ်အစိုးရသာ ဖြစ်ပြီး ဆက်လက်၍ စစ်အစိုးရကို သူတို့ နှစ်ဦးစလုံး ဆန့်ကျင်အတိုက်အခံပြုနေကြဆဲဖြစ်သည်။
ကိုတင်အေးက “သူ့ကိုချစ်မိတာကြောင့်တော့ သူ့ရဲ့ နိုင်ငံရေးကိစ္စကို အနှောင့် အယှက် မဖြစ်စေရဘူး။ ပြီးတော့ ကျနော့်အတွက်လည်း တိုင်းပြည်အရေးနဲ့ ယှဉ်လာရင် သူက ဒုတိယဖြစ်မှာပဲဆိုတာ တခါက သူ့ကိုပြောဖူးတယ်” ဟု ပြန်ပြောင်းပြောပြခဲ့သည်။
မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း ဖြစ်လာခဲ့သည်။ တံခါးကို လာခေါက်နေပြီ။ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီ။ နောက်တော့ မနိုဘယ်အေးကို စစ်အာဏာပိုင်များက အင်းစိန်ထောင်တွင် ချုပ်နှောင်ထားလိုက်ကြသည်။ သူတို့ချစ်သူ နှစ်ဦး မည်မျှကြာရှည် ခွဲခွာကြရမည်မသိ။ မနိုဘယ်အေးကို ယခုတိုင် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်း မရှိသေးဘဲ ချုပ်နှောင်ထားဆဲ ဖြစ်သည်။
ကိုတင်အေးက မနိုဘယ်အေးအတွက် ဂုဏ်ယူသည်ဟု ပြောသည်။ တိုင်းပြည်အတွက် ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေး ကြိုးပမ်းရင်း ယခုကဲ့သို့ ချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရသည့်အတွက် သူဂုဏ်ယူသည်။ သူတို့ ရန်ကုန်တွင် ရှိနေကြစဉ် အတွင်း မနိုဘယ်အေးက ကိုမင်းကိုနိုင်ဦးဆောင်သည့် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများ အင်အားစုတွင် ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သည်။ ယခုအခါ ကိုမင်းကိုနိုင်လည်း အင်းစိန်ထောင်အတွင်း ချုပ်နှောင်ခံနေရဆဲ ဖြစ်၏။ ၂၀၀၇ ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် စစ်အစိုးရက လောင်စာဆီဈေးများ ရုတ်ချည်း မတန်တဆ မြှင့်တင်လိုက်ပြီး နောက်ပိုင်း ၈၈ ကျောင်းသားများအုပ်စုက လမ်းပေါ်ထွက် ချီတက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ နောက်ပိုင်း ဤလှုပ် ရှားမှုကြောင့်ပင် သံဃာများဦးဆောင်သည့် စက်တင်ဘာဆန္ဒပြပွဲများ ဆက်တိုက် ဖြစ်ပွားလာခဲ့ရသည်။
ဤကျောင်းသားအဖွဲ့ဝင်များမှာ ယခင်နှစ် သြဂုတ်လအတွင်း ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရပြီး ကျန်ရှိသူများ မှာလည်း ထိုအချိန်မှစ၍ လျှို့ဝှက်ပုန်းအောင်း နေထိုင်ရင်း မြေအောက်နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုများ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေကြသည်။
ကိုတင်အေးနှင့် မနိုဘယ်အေးတို့၏ ချစ်ဇာတ်လမ်းမျိုးကို စစ်အာဏာရှင် လက်အောက်တွင် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှား နေကြရသူတိုင်း ကြုံတွေ့နိုင်ကြသည်။ လက်ထပ်ထားသူ အိမ်ထောင်ရှင် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ၊ ချစ်သူများ မှာ ချစ်လျှက်နှင့် ကွေကွင်းကြရသည်။ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းချိန် ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှ စ၍ ထိုဇာတ်လမ်းမျိုးပေါင်း များစွာ ရှိခဲ့ပါသည်။
လွန်ခဲ့သည့် နှစ် ၂၀ အတွင်းက ထောင်နှင့်ချီသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပြီး ထိုသူများ အားလုံးနီးပါးလိုလို ကွေကွင်းခဲ့ကြရသည့် ဇာတ်လမ်းများ ရှိနေနိုင်ပါသည်။ ချစ်သူချင်း၊ မိဘနှင့် သားသမီး၊ ဇနီး ခင်ပွန်း စသဖြင့် ချစ်သောသူများနှင့် ကွေကွင်းခဲ့ရမှုများ ကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ကြရပေလိမ့်မည်။
ယခုဖြစ်ရပ်ကတော့ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူဖခင်နှင့် ကွေကွင်းပြီး ကြီးပြင်းလာခဲ့ရသည့် သမီးတဦး၏ ဇာတ်လမ်း ဖြစ်သည်။ သမီးငယ်မှာ ဖခင်ဖြစ်သူ အင်းစိန်ထောင်အတွင်း နှစ်ရှည် အကျဉ်းချခံထားရစဉ် ဖခင်မဲ့ဘဝဖြင့် ကြီးပြင်းခဲ့ရသည်။
ကိုတင်အေး၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တဦးဖြစ်သည့် ကိုနေ၀င်းမှာ ကိုတင်အေးအပါအ၀င် တခြားသော နိုင်ငံရေးသမား ၂၀၀ ခန့်နှင့်အတူ ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရသည်။ ကိုနေ၀င်း ဖမ်းဆီးခံရစဉ်၌ အသက် ၈ လသာရှိသည့် သမီးငယ်ကလေးကို အပြင်တွင် ချန်ထားခဲ့ရသည်။ သူက ထောင်ဒဏ် အနှစ် ၂၀ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရသော်လည်း ၁၅ နှစ်ကြာ အကျဉ်းချခံခဲ့ရပြီး ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ပြန်လည် လွတ်မြောက် လာခဲ့သည်။
တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်တဦးဖြစ်သူ ကိုနေ၀င်းကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင် တဖန်ထပ်မံ ဖမ်းဆီးခဲ့ပြန်သည်။ သူ့ကို ပထမအကြိမ် ဖမ်းဆီးစဉ်က အသက် ၈ လသာရှိသေးပြီး ယခုအခါ အသက် ၂၀ အရွယ်ရှိနေကာ ရန်ကုန် အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်၌ ပညာသင်ကြားနေသည့် သမီး မနှင်းပွင့်ဝေလည်း သူနှင့်အတူ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။
အဖေတူသမီးဟုဆိုရမည့် မနှင်းပွင့်ဝေသည် ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်နှင့် ဆက် စပ်၍ လှုပ်ရှားမှုများဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှစ၍ လျှို့ဝှက် လှုပ်ရှားနေခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ သံဃာ များဦးဆောင်သည့် ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာဆန္ဒပြပွဲများ ကာလက မနှင်းပွင့်ဝေသည် ၎င်းအဖွဲ့၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအဖြစ် ဆောင်ရွက်နေခဲ့သည်။
ယခုအချိန်တွင်တော့ ဖခင်ရော၊ သမီးပါ အင်းစိန်ထောင်အတွင်း ချုပ်နှောင်ခံထားရသည်။
ယခုဖော်ပြခဲ့သည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံမှ ကြေကွဲဖွယ် ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ကွေကွင်းဆုံးရှုံးရခြင်းဆိုင်ရာ ဖြစ်ရပ် ၂ ခုသာ ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံကို ချစ်ကြသည်။ ဤနိုင်ငံကိုပင် ဆုံးရှုံးကြရသည်။ ယောက်ျားတဦး၊ သို့မဟုတ် မိန်းမတဦးကို ချစ်ကြ သည်။ ၎င်းယောက်ျား၊ ၎င်းမိန်းမကိုပင် ကွေကွင်းဆုံးရှုံးကြရပြန်သည်။
ဤဖြစ်ရပ်များကြောင့် ပျော်ရွှင်မှု၊ ၀မ်းနည်းပူဆွေးမှုတို့ ဖြစ်ပေါ်ခံစားကြရပြီး မျက်ရည်များလည်း ဝေခဲ့ ကြရသည်။
“ကျနော် နိုဘယ်နဲ့ နောက်တကြိမ် ဘယ်တော့ တွေ့နိုင်မယ်ဆိုတာ မပြောနိုင်ဘူးဗျာ” ဟု ကိုတင်အေးက ပြောသည်။ “ဒါပေမယ့် သေချာတာတခုက သူ ဘယ်လောက်ကြာအောင် ထောင်ထဲမှာနေရပါစေ။ ကျနော်စောင့်မယ်။ ဒါ ကျနော့်ရဲ့သံမဏိသစ္စာပဲ”
ကြံ့ဖွံ့များ ၂၄ နာရီ လုံခြုံရေးကင်း ချမည်
အောင်သက်ဝိုင်း ဇူလိုင် ၄ ၊၂၀၀၈
ရန်ကုန်တိုင်းရှိ ကြံ့ဖွံ့ရုံးများအားလုံး အပါအ၀င် ကြံ့ဖွံ့အသင်းနှင့် ဆက်စပ်သော အဆောက်အအုံများ အားလုံး တွင် လုံခြုံရေးများ ၂၄ နာရီချထားမည်ဖြစ်ပြီး ကြံ့ဖွံ့အဖွဲ့ဝင်များကိုလည်း လုံခြုံရေးတပ်အသွင်ဆောင်သည့် အဖွဲ့ များပြုလုပ်ဖွဲ့ စည်းရန်ရှိကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း ကြံ့ဖွံ့အသင်း တာဝန်ခံ၊ ရန်ကုန်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ ဥက္ကဌ မြို့တော်ဝန် ဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်သိန်းလင်းက ပြောဆိုကြောင်း သိရှိရသည်။
ဇူလိုင်လ ၂ ရက်နေ့ ပြည်တွင်းသတင်းဂျာနယ်များနှင့် တွေ့ဆုံပွဲတွင် ယင်းသို့ပြောဆိုခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန် မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ အရာရှိကြီး တဦးက ပြောသည်။
“အဘ(ဗိုလ်မှူးချူပ်အောင်သိန်းလင်း)က ပြည်ခိုင်ဖြိုးရုံးတွေအားလုံးမှာ အလှည့်ကျ ၂၄ နာရီ လုံခြုံရေးကင်းတွေ ကိုချဖို့်ရှိတယ်လို့ ပြည်တွင်းဂျာနယ်တွေ ကိုပြောတယ်။ ပြီးတော့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးအသင်းဝင်တွေ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ ပုံစံ မျိုးပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းမယ်ဆိုတာကိုပြောတယ်”ဟု ယင်းစည်ပင်အရာရှိကြီးက ပြောသည်။
ဇူလိုင် ၁ရက်နေ့ ရန်ကုန်တိုင်း ရွှေပြည်သာမြို့နယ် အမှတ် ၆ ရပ်ကွက်ရှိ မြို့နယ်ကြံ့ဖွံ့ရုံးတွင် ပြင်းထန်သော ဗုံး ပေါက်ကွဲမှုတရပ်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်း ယင်းသို့သော လုံခြုံရေးအစီအမံများ ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိ ရသည်။
၂၄ နာရီလုံခြုံရေးချထားမည့်နေရာများတွင် ကြံ့ဖွံ့ရုံးများသာမက ကြံ့ဖွံ့အဖွဲ့က ဆောင်ရွက်နေသည့် အခမဲ့ ဆေးခန်းများ၊ တခြားသော ကြံ့ဖွံ့အဖွဲ့နှင့် သက်ဆိုင်သော နေရာရုံးအဆောက်အဦးများတွင်လည်း လုံခြုံရေးများ ချထားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်ကြံ့ဖွံ့အဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောသည်။
လုံခြုံရေးများချထားမည့်အပြင် ကြံ့ဖွံ့အဖွဲ့ဝင်များကိုလည်း လုံခြုံရေးနှင့်ပတ်သက်သော သင်တန်းများ ပို့ချ ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း အထက်ပါ ကြံ့ဖွံ့အဖွဲ့ဝင်ကဆိုသည်။
“ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းက မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်အလိုက် လုံခြုံရေးတွေလုပ်ကြဖို့သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက် အလိုက် အစည်းအဝေး တွေခေါ်နေပါပြီ။ ဒီလိုလုံခြုံရေးတာဝန်နဲ့အစီအစဉ်တွေကို ကြံ့ဖွံ့အသင်း ၀င်တွေက ဦးဆောင်လုပ်ကြ ဖို့ရှိပါတယ်”ဟု ရန်ကုန် ကျောက်တံတား မြို့နယ် မယက အဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းရှိ ရပ်ကွက်များအားလုံးတွင်လည်း ရပ်ကွက်လုံခြုံရေးကောင်စီများ မဖြစ်မနေဖွဲ့စည်းရန် ညွှန်ကြား ချက် များထွက်ရှိလာပြီး ရက်ပိုင်းအတွင်းဖွဲ့စည်းရန် တိုင်း၊ ခရိုင်နှင့်မြို့နယ် မယက အဖွဲ့များက ဖိအားပေးနေ ကြောင်း လှိုင်သာယာ၊ ရန်ကင်းနှင့် ပန်းဘဲတန်း မြို့နယ်များမှ ရပ်ကွက် ပြည်သူများ ကဆိုသည်။
ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့က ရွှေပြည်သာ ကြံ့ဖွံ့ရုံးတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဗုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ကြံ့ဖွံ့ရုံးအောက်ထပ် အ၀င် တံခါးမကြီး၊ ပြတင်းပေါက်မှန်များ၊ စာရေးစားပွဲသုံးလုံး၊ ကုလားထိုင်ခြောက်လုံး၊ လက်နှိပ်စက်တလုံး၊ တယ်လီဖုန်း ကိုယ်ထည် တခုပျက်စီးပြီး အုတ်နံရံအကျယ် ခြောက်လက်မ၊ အမြင့် ကိုးလက်မခန့် ပေါက်ထွက် ပျက်စီးသွားကာ လူထိခိုက် ဒဏ်ရာရမှု မရှိကြောင်း စစ်အစိုးရသတင်းစာများ က သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
ယင်းကဲ့သို့သော ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပမာဏ တန်ဖိုးအားဖြင့် ငွေ ၁၅ သိန်းကျော်ရှိသည်ဟု သိရ ကြောင်း ရွှေပြည်သာ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့၏ လျှို့ဝှက်သတင်းပေးပို့ချက်ကို ကိုးကားပြီး ရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် တဦးက ပြောသည်။
အဆိုပါ ရွှေပြည်သာ ကြံ့ဖွံ့ရုံး ဗုံးကွဲပြီး ၂ ရက်ခန့်အကြာတွင် ပြည်ပ အခြေစိုက် စွမ်းအားမြှင့် မြန်မာ ကျောင်းသား စစ်သည်တော်များအဖွဲ့(VWSB) က ၎င်းတို့လက်ချက် ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
ကိုထင်ကျော်ကို တရားရုံး မထုတ်ဘဲ ရမန်ပေး
သောကြာနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 04 2008 16:01 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ချင်းမိုင်။ ။ လောင်စာဆီဈေးနှုန်း ကျဆင်းရေး ဦးဆောင် ဆန္ဒပြခဲ့သူ အဖမ်းဆီးခံ ကိုထင်ကျော်အား ယမန်နေ့က အင်းစိန်ထောင်အတွင်း ၅ ကြိမ်မြောက် ရုံးချိန်းရက် ဖြစ်သော်လည်း ရုံးမထုတ်ဘဲ ယမန်ပေးခဲ့သည်။
ရန်ကုန်မြို့ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လိုလားသူများ အဖွဲ့ဝင် ကိုထင်ကျော်အား အကျဉ်းထောင်အတွင်း အနောက်ပိုင်းခရိုင် တရားရုံးမှ တရားသူကြီး ဦးဌေးဝင်း ပြောင်းရွှေ့သွားရာ တရားသူကြီးအသစ် ရောက်မလာသေးသဖြင့် လာမည့် ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်နေ့သို့ ထပ်မံ၍ ရုံးချိန်းရက် ပေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
“သူ့ကို စစ်နေတဲ့ အနောက်ပိုင်းခရိုင် တရားရုံးရှေ့နေက ပြောင်းသွားတယ်။ သူ့နေရာကို နောက်လာမယ့် တရားသူကြီးက မလာသေးဘူးဆိုပြီး မစစ်ဖြစ်တာပါ” ဟု ကိုထင်ကျော်၏ အကျိုးဆောင်ရှေ့နေ ဦးခင်မောင်ရှိန်က ပြောသည်။
ကိုထင်ကျော်အား ၂ဝဝ၇ ခုနှစ် မတ်လ ၂၂ ရက်နေ့က ကမာရွတ်မြို့နယ် လှည်းတန်းလမ်းဆုံ၌ ဘုန်းကြီးဝတ်ခွင့် အတွက် ဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှု၊ ၂ဝဝ၇ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၂ ရက်နေ့က သင်္ကန်းကျွန်း စံပြဈေးတွင် ကုန်ဈေးနှုန်း ကျဆင်းရေး ဆန္ဒပြမှု၊ သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်နေ့က ရန်ကုန်သိမ်ကြီးဈေးတွင် ဆန္ဒပြမှု စသည့် အမှုတမှုစီအတွက် အစိုးရကို အကြည်ညိုပျက်စေမှု ပုဒ်မ ၁၂၄ (က) တို့ဖြင့် တရားစွဲဆိုထားသည်။
အမှုများကို အနောက်ပိုင်းခရိုင် တရားရုံးမှ တာဝန်ယူ စစ်ဆေးနေကာ လက်ရှိတွင် ပန်းပဲတန်း မြို့နယ်၌ ဆန္ဒပြမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး သက်သေများကို စစ်ဆေးနေသည်မှာ မပြီးစီးသေးကြောင်း သိရသည်။
၂ဝဝ၇ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် မြန်မာစစ်အစိုးရက လောင်စာဆီ ဈေးနှုန်းများ အဆမတန် တိုးမြှင့်ခဲ့သည့်အပေါ် ဈေးနှုန်း ပြန်ချပေးရန် သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့တွင် တောင်းဆို ဆန္ဒပြရေးအတွက် ကိုထင်ကျော်က ပြည်သူများအား တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခဲ့ပြီး သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်နေ့ သိမ်ကြီးဈေး ဆန္ဒပြပွဲတွင် သူ့ကို အာဏာပိုင်များက ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
ရှေ့နေ ဦးခင်မောင်ရှိန်က “ပြည်သူတယောက်က မကျေနပ်မှုကို တောင်းဆိုတာဟာ တကယ်တော့ ၁၂၄ (က) နဲ့ မငြိစွန်းဘူး။ နိုင်ငံတော် အကြည်ညို ပျက်စေတဲ့ကိစ္စ မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ ကိုထင်ကျော်တို့က ဆန္ဒဖော်ထုတ်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက်၊ ဒါတွေကလည်း အဖြစ်မှန် ဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာ တောင်းဆိုတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် နိုင်ငံတော်ကို အကြည်ညိုပျက်စေတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို အန်ကယ်တို့ ရုံးတော်မှာ လျှောက်ထားပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
နိုင်ငံတော်ကို အကြည်ညိုပျက်စေမှု ပုဒ်မ ၁၂၄ (က) သည် တသက်တကျွန်းနှင့် ထောင်ဒဏ် နှစ် ၂ဝ အထိ ကျခံရနိုင်ပြီး၊ နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝမ်ပိပြားမှုကို ပျက်ပြားစေရန် လှုံ့ဆော်မှု ပုဒ်မ ၅ဝ၅ (ခ) သည် ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ် ကျနိုင်ရာ ပြစ်မှုမြောက်ခဲ့လျှင် အမြင့်ဆုံး နှစ် ၆ဝ နှင့် အနိမ့်ဆုံး ၆ နှစ် ကျခံရနိုင်သည်ဟု ဦးခင်မောင်ရှိန်က ပြောသည်။
ကိုထင်ကျော်သည် အင်းစိန်ထောင်တွင် ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် သံဃာတော်များ၊ ကျောင်းသားနှင့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ထောင်တွင်း၌ ဆန္ဒပြခဲ့သလို၊ အကျဉ်းထောင်အတွင်း နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ လမ်းလျှောက်ခွင့် ရရေးလည်း တောင်းဆိုဆန္ဒပြဖူးကာ တတိယအကြိမ်တွင် “စစ်အာဏာရှင်စနစ် ကျဆုံးပါစေ” ဟု ကြွေးကြော် အော်ဟစ်သဖြင့် ၃ ကြိမ်မြောက် စစ်ခွေးတိုက်တွင် တိုက်ပိတ်ခံရသူ ဖြစ်သည်။
ချက်ဗလေ ဘတ်စ်ကားကြီးများ ရန်ကုန်မှ တဖြည်းဖြည်း ဆုတ်ခွါရတော့မည်
ကြာသပတေးနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 03 2008 19:11 - မြန်မာစံတော်ချိန်
နယူးဒေလီ။ ။ ရန်ကုန်မြို့တွင် အမှတ်အသား တခုဖြစ်နေခဲ့သော ဒုတိယကမ္ဘာစစ် လက်ကျန် ချက်ဗလေ ဘတ်စ်ကားကြီး အစီးရေ ၄ဝဝ ကျော်ကို တဖြည်းဖြည်းချင်း လျှော့ချသွားကာ ယာဉ်လိုင်းပြေးဆွဲခွင့် ရုပ်သိမ်းတော့မည် ဖြစ်သည်။
မော်တော်ယာဉ် လိုင်းပေါင်းစုံ ထိမ်းသိမ်းရေး (မထသ) မှ ရန်ကုန်မြို့တွင်း ပြေးဆွဲလျက်ရှိသည့် သစ်သားဖြင့် ရောစပ်ထားသော ကိုယ်ထည် ရှိသည့် ချက်ဗလေ ကားများအား ခေတ်ပေါ်ကားများဖြင့် အစားထိုးရေး စီမံကိန်း စတင်လျက် ရှိသည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင်း ယဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု လျော့ကျနိုင်ရန်အတွက် ဂျပန်မှ ထုတ်လုပ်သည့် City Bus များဖြင့် အစားထိုး ပြောင်းလဲ ပြေးဆွဲမည် ဖြစ်ကြောင်း မထသ မှ အမည်မဖော်လိုသူ တာဝန်ရှိသူတဦးက မဇ္ဈိမကို ယခုလို ပြောသည်။
“City Bus တွေကို သုံးတာပါ။ အခုတော့ ဂျပန်များတယ်။ အဟောင်းတွေက လူနည်းနည်းပဲ တင်လို့ရတယ်လေ။ City Bus ကျတော့ လူများများ တင်နိုင်တယ်။ လူများများဆန့်တဲ့ ကားတွေကို သုံးမှ မြို့ထဲမှာ ယဉ်ပိတ်ဆို့မှု နည်းသွားမှာပေါ့။ အရင်တုန်းက မြို့ထဲကို ၂ စီးဝင်ရပေမယ့် နောက်ပိုင်းတော့ တစီးပဲ ဝင်ရတဲ့ သဘော ဖြစ်သွားတာပေါ့” ဟု သူက ပြောသည်။
ချက်ဗလေများသည် အင်ဂျင်စက်များ ကောင်းနေဆဲ ဖြစ်သော်လည်း City Bus များသည် ခရီးသည် ပိုမိုဆန့်ခြင်းကလည်း အကြောင်းတရပ်ဟု မထသ အရာရှိက ပြောသည်။
ဓဇွန်လ ၁ ရက်ကတည်းက ကျနော်တို့ ရသလောက်နဲ့ ထိုးနေတာပဲ။ ကျနော်တို့က ဟိုကရောက်လာရင် ထိုးလိုက်တာပဲ။ ၁ဝ စီး ရောက်လိုက်၊ ၁၅ စီး ရောက်လိုက်ဆိုတော့၊ ဘယ်နှစ်စီး အစားထိုးမလဲ ဆိုတာတော့ မရှိပါဘူး။ ငွေရေးကြေးရေးပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်။ စုစုပေါင်း အစီး ၆ဝ ကျော်ပဲ ရောက်ပါသေးတယ်” ဟု သူက ပြောသည်။
City Bus များသည် ပါရမီ လိုင်းကားများကဲ့သို့ပင် ယာဉ်စီးခ ခရီးသည်တဦး ကျပ်ငွေ ၂ဝဝ ဖြစ်ပြီး ခရီးသည် အထိုင်ကိုသာ ဦးစားပေးကာ မတ်တပ်စီး ခရီးသည်များ တင်ဆောင်ပါက ယဉ်မောင်းအား ဖမ်းဆီး အရေးယူလေ့ ရှိကြောင်းလည်း မထသ အရာရှိက ပြောသည်။
သို့သော်လည်း ရန်ကုန် ဆင်ခြေဖုံးမြို့များဖြစ်သည့် သာကေတ၊ တောင်ဒဂုံ၊ မြောက်ဒဂုံ စသည့် မြို့နယ်များတွင် ချက်ဗလေ ဘတ်စ်ကားများ ဆက်လက် အသုံးပြုဆဲ ဖြစ်သည်။
လတ်တလော ရန်ကုန်မြို့တွင်း ပြေးဆွဲနေသည့် လိုင်းကားစီးရေ စုစုပေါင်း ၅ဝဝဝ ကျော်ရှိသည်။
လူထုဆန္ဒကို ဆန့်ကျင်သည့် မဲပြားများ” အစီရင်ခံစာ ပလောင်က ထုတ်ပြန်
ကြာသပတေးနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 03 2008 19:07 - မြန်မာစံတော်ချိန်
နယူးဒေလီ။ ။ မေလ ၁ဝ ရက် လူထုဆန္ဒ ခံယူပွဲတွင် ထောက်ခံမဲရရန် အာဏာပိုင်များက နည်းမျိုးစုံဖြင့် ဖိအားပေး လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း ပလောင်အလုပ်အဖွဲ့က ယနေ့တွင် ပြောဆိုလိုက်သည်။
ပလောင်လူထုများ နေထိုင်ရာ ရှမ်းပြည်နယ် မြို့နယ်အချို့တွင် အခြေခံဥပဒေ အတည်ပြုရေး ဆန္ဒခံယူပွဲ ကျင်းပရာ ပြည်သူ့သဘောထား မပါရှိဘဲ ထောက်ခံမဲရရန် အာဏာပိုင်များက အတင်းအဓမ္မ ပြုလုပ်ခဲ့သည်များအား စုံစမ်း ဖော်ထုတ်ကာ “လူထုဆန္ဒကို ဆန့်ကျင်သည့် မဲပြားများ” အမည်ရှိ အစီရင်ခံစာကို ပလောင်အလုပ်အဖွဲ့က ထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
“မဲရုံစောင့်တဲ့ သူတွေက မဲပေးတဲ့ သူတွေကို အဓမ္မ ထောက်ခံခိုင်းတယ်။ မဲပုံးထဲကို မထည့်ခင်အချိန်မှာ အဲဒီ မဲပြားကို ဖွင့်ကြည့်စစ်ဆေးတယ်။ တချို့နေရာတွေမှာ ဥက္ကဋ္ဌ က တရွာလုံးကိုယ်စား မဲပေးတာတွေ ရှိတယ်။ မဲပေးဖို့ အချိန် သတ်မှတ်ထားပေမယ့် သတ်မှတ်တဲ့ အချိန်အတိုင်း မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ မသမာမှုတွေ အများကြီး တွေ့နေရတယ်” ဟု ပလောင်လူငယ် လုပ်ငန်းကွန်ယက်အဖွဲ့ ပြောခွင့်ရ ကိုမိုင်းအောင်ကို က ပြောသည်။
ပလောင် အလုပ်အဖွဲ့တွင် ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် ပလောင်ပြည်နယ် လွတ်မြောက်ရေး တပ်ဦး (PSLF)၊ ပလောင်လူငယ် လုပ်ငန်းကွန်ယက်အဖွဲ့ (PYNG) နှင့် ပလောင် အမျိုးသမီး အစည်းအရုံး (PWO) စုပေါင်းပါဝင်ပြီး သူတို့က ပလောင်လူထုများ နေထိုင်ရာ နမ့်ဆန်၊ လားရှိုး၊ ကျောက်မဲ၊ မိုင်းငေါ့၊ သီပေါ၊ မန်တုန်၊ နမ္မတူ၊ ကွတ်ခိုင်၊ နမ့်ခမ်းနှင့် မူဆယ်မြို့နယ် တို့တွင် ကန့်ကွက်မဲ ထည့်ဝင်ရေး လှုပ်ရှားမှုများ၊ လူထုဆန္ဒခံယူပွဲ စောင့်ကြည့်ရေး လုပ်ငန်း စဉ်များအရ သက်ဆိုင်ရာ ဒေသများတွင် စုံစမ်း ဖော်ထုတ်ကာ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
အတင်းအဓမ္မ ထောက်ခံမဲ ထည့်ခိုင်းခြင်း၊ ကြိုတင် ထောက်ခံမဲပေးခြင်း၊ မဲလိမ်ခြင်း အစရှိသည့် လူထု၏ ရိုးသားသော သဘောထား ဆန္ဒကို နည်းမျိုးစုံဖြင့် မတရား အာဏာအလွှဲသုံးစား လုပ်ခဲ့သည့် နအဖ လုပ်ရပ်များကို အဆိုပါ မြို့နယ်များ အတွင်းရှိ မဲရုံ ၅၇ ရုံကို အနီးကပ် စောင့်ကြည့်ကာ ဒေသခံပြည်သူများ၊ မဲရုံစောင့်ကြည့်ရေး တာဝန်ခံများနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်များ၊ အချက်အလက်များကို စုစည်း၍ အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ အချို့နေရာများတွင် မဲရုံတာဝန်ရှိများ၏ ရင့်ဖွင့် ပြောဆိုချက်နှင့် ဓာတ်ပုံ အထောက်အထားပါ ပါရှိသည်။
ကိုမိုင်းအောင်ကို က ဓကျောက်မဲ ငြိမ်းချမ်းရေးကုန်းမှာရှိတဲ့ ပလောင်ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ (ကျောက်မဲ) ဦးကျော်ရင် ပြောတာက ဒီရွာထဲမှာ နေပြီးတော့ ကန့်ကွက်မဲ ထွက်လာလို့ရှိရင် ဒီရပ်ကွက်ထဲကနေ နှင်ထုတ်မယ် ပြောတယ်။ နမ့်ဆန်ဘက်မှာ ပလောင် လ္ဘက်စက်ရုံ လုပ်တဲ့ ဗိုလ်ကြီး သန်းထွဋ်က ပြောတယ်။ ပလောင်ဒေသမှာ ကန့်ကွက်မဲတွေ များမယ်ဆိုရင် အောက်ပိုင်းက တင်သွင်းတဲ့ ဆန်တွေကို ပိတ်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ အမိန့်စာ ထုတ်ပြန်တာတွေ ရှိတယ်တဲ့” ဟု ပြောသည်။
အစီရင်ခံစာထဲတွင် ပလောင်ဒေသ အတွင်းရှိ မဲရုံစောင့်ကြည့်ရေးတွင် ပါဝင်သူတဦးက “ပလောင်ဒေသအတွင်း ကျေးရွာအုပ်စုများရှိ မဲပေးနိုင်တဲ့သူရဲ့ ၃ဝ ရာခိုင်နှုန်း ဝန်းကျင်လောက်သာ မဲရုံသို့ ကိုယ်တိုင်လာရောက် မဲပေးခဲ့ကြရပြီး၊ ကျန်တဲ့ သူတွေကတော့ ကြိုတင်မဲနဲ့ ကိုယ်စားပြုမဲတွေနဲ့ပဲ အားလုံးပြီးသွားတယ်။ မဲရုံကို မဲလာပေးဖို့ ခေါ်လာတဲ့သူတွေဟာ ပလောင်ရိုးရာ ဝတ်စုံတွေဝတ်ပြီး ဟန်ပြ ထောက်ခံမဲတွေပဲ ပေးခဲ့ကြရပါတယ်” ဟု ပြောဆိုသည်ကိုလည်း ဖော်ပြထားသည်။
ထို့အပြင် မြို့တွင်းတွင် နေထိုင်သူများနှင့် နအဖ စစ်အုပ်စု၏ မတရားဖိနှိပ်မှုကို မကြောက်မရွံ့ ဆန့်ကျင်သူများသည် လူထုဆန္ဒ ခံယူပွဲတွင် ကန့်ကွက်မဲများ ထည့်ခဲ့ကြသော်လည်း၊ လူထုဆန္ဒခံယူပွဲ ကျင်းပရေး ကော်မရှင်၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အဆင့်ဆင့်အရ နအဖ စစ်ခေါင်းဆောင်များ ညွှန်ကြားထားသည့်အတိုင်း ထောက်ခံမဲပြားများ အဖြစ်သို့သာ ပြောင်းလဲခဲ့ရသည်ဟုလည်း ဆိုထားသေးသည်။
နအဖ ၏ ပြည်သူများအပေါ် နည်းမျိုးစုံဖြင့် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်နေသည်များကို နိုင်ငံတကာမှ သိရှိစေရန်၊ နိုင်ငံတကာ မိသားစုအနေဖြင့် စုစည်းညီညွတ်စွာ ဝိုင်းဝန်း ကန့်ကွက်ရန်နှင့် မြန်မာပြည်၏ နိုင်ငံရေး ပြဿနာကို ဝိုင်းဝန်းကူညီ အဖြေရှာရန်အတွက် အစီရင်ခံစာကို ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အပါအဝင် အာဆီယံနိုင်ငံများထံ ပေးပို့သွားမည်ဟု ပလောင်အလုပ်အဖွဲ့က ပြောသည်။
အောင်သက်ဝိုင်း/ရန်ကုန် ဇူလိုင် ၄၊ ၂၀၀၈
ရန်ကုန် - ပြည်လမ်းမ ဘေးတနေရာ၊ အင်းလျားကန်ဘောင်ရှေ့ တံတားဖြူ မှတ်တိုင်နားက မှုန်ပျပျ လမ်းမီးတိုင် အောက်မှာ အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးတဦး တစုံတရာကို မျှော်လင့် စောင့်စားနေပါတယ်။ ည၈ နာရီ ကျော်ချိန်ဖြစ်လို့ လူအသွားအလာ နည်းပါး နေပေမယ့် မိန်းကလေးငယ်ကတော့ အကြောက်အလန့် ရှိပုံမရပါဘူး။
ဖွေးဆွတ်နေတဲ့အဖြူရောင် အင်္ကျီ၊ အနက်ရောင် စကတ်ကို ၀တ်ဆင်ထားတဲ့ ကောင်မလေးရဲ့ ပါးပြင်ထက်မှာသနပ်ခါး ပါးကွက်ကြီးနှစ်ခုကို ခပ်ထူထူ လိမ်းထားတယ်။ ညာဘက်လက်မှာ ချာလီထီး တချောင်းကိုင်ထားပြီး သူ့မျက်လုံးတွေ ကတော့ လမ်းမပေါ် ဖြတ်သန်း သွားလာနေတဲ့ မော်တော်ကားတိုင်းကို လှမ်းမျှော်ကြည့်နေပါတယ်။
လမ်းမပေါ်ကို မျှော်ငေးကြည့်နေတုန်း ရုတ်တရက် ဆိုသလို တက္ကစီအငှားယာဉ်တစီး ဟွန်းသံပေးရင်း သူ့နားမှာရပ်လိုက် တယ်။ ကားပေါ်က ခပ်၀၀ အမျိုးသားကြီးတဦး ဆင်းလာပြီး သူ့နားကို တိုးကပ်လာပေမယ့် ကောင်မလေးက စိုးရိမ် ထိတ်လန့်ဟန်မပြဘဲ ရဲတင်းစွာနဲ့ အမျိုးသားကြီးနားကို ချဉ်းကပ်သွားပါတယ်။
“တခါလျှော့ (လိင်ဆက်ဆံချိန်တနာရီနီးပါးခန့်ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်) ရင် ၄၅၀၀။ တညလုံးဆိုရင်တော့ ၁၅၀၀၀။ စိတ်တိုင်း ကျစေရမယ်။ စိတ်တိုင်းမကျရင် ငွေမပေးနဲ့။ လူနှစ်ယောက်ထိလက်ခံတယ်” လိုိ့် ကောင်မလေးဆီက စကားသံ ကျယ်ကျယ် လောင်လောင် ထွက်ပေါ်လာချိန်မှာ ခပ်၀၀ အမျိူးသားက ခန္ဓာကိုယ် သိမ့်သိမ့်တုန်အောင် ရယ်မောရင်း ရီဝေတဲ့ မျက်လုံး တွေနဲ့ ကောင်မလေးကို စိုက်ကြည့်နေပါတယ်။
ခဏအကြာမှာ ကောင်မလေးရဲ့ ပုခုံးကို သူ့ညာလက်နဲ့သိုင်းဖက်လို့ တက္ကစီ ဆီ ခေါ်သွား တယ်။ အဲဒီနောက်မှာ တက္ကစီ ကားဟာ အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ ရန်ကုန်မြို့တွင်းနေရာတခုဆီ ဦးတည် ထွက်ခွာသွားပါတော့တယ်။ အဌားယာဉ်ပေါ်မှာ လိုက်ပါ သွားတဲ့ ကောင်မလေးကတော့ ညမွှေးပန်းလို့ အများခေါ်ကြ တဲ့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် ပြည့်တန်ဆာမလေး တဦးပါပဲ။
စားဝတ်နေရေး အဆင်မပြေမှု၊ စီးပွားရေးကြပ်တည်းမှုတွေနဲ့ အလုပ်အကိုင် ရှားပါးမှု တွေကြောင့် ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ လမ်းမကြီး တွေ၊ အချက်အချာကျ လမ်းဆုံလမ်းခွတွေ၊ ရုပ်ရှင်ရုံတွေ၊ ပန်းခြံနဲ့ ကားဂိတ်တွေမှာ လိင်ဖျော်ဖြေရေး လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင် အသက်မွေး ၀မ်းကြောင်းပြုလာတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် အမျိုးသမီးငယ်တွေ တနေ့တခြား တိုးပွားများပြားလာတာကို တွေ့ရှိနေရပါတယ်။
လိင်ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကြတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် မိန်းကလေးတွေကတော့ နယ်မြို့ တွေနဲ့ ရန်ကုန်မြို့ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်တွေက အများဆုံးဖြစ်ပြီး နာဂစ်မုန်တိုင်း မြန်မာနိုင်ငံကို ၀င်ရောက်တိုက်ခတ်ပြီးချိန် မှာတော့ လိင်ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်တဲ့ ဆယ်ကျော်သက် မိန်းကလေးငယ် တွေနဲ့ အခြားအသက် အရွယ်စုံ အမျိုးသမီးတွေ အရေအတွက်အားဖြင့် ပိုပြီးများလာတယ်လို့ ရန်ကုန်မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။
ညနေ ၄ နာရီအချိန် ရန်ကုန်မြို့တော်ရဲ့အချက်အချာကျ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လမ်းမကြီး ဘေးမှာရှိတဲ့ သွင် ရုပ်ရှင်ရုံအနီး ကနေ ကျနော် လမ်းလျှောက်သွားနေတုန်း “အကို ဘာလိုချင်လဲ ပြောကြည့်လေ။ ဒီမှာ အရွယ်စုံ ဆိုက်မျိုးစုံရှိတယ်။ ကြိုက်တာရွေးလို့ရတယ်။ အပြုအစုကောင်းတယ်” ဆိုတဲ့ စကားသံနဲ့အတူ အသက် ၄၅ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးကြီးတဦး ချဉ်းကပ်လာတယ်။
အမျိုးသမီးကြီးရဲ့နောက်မှာအသက် ၁၅ နှစ်အရွယ်ကနေ အသက် ၃၀ ကျော်အရွယ်ထိ အမျိုးသမီး ၉ ဦးလောက် ကပ်လျက် လိုက်လာတယ်။ သူတို့တွေရဲ့မျက်လုံးတွေက ၀ါကျင်ကျင်အရောင်ပေါက်နေပြီး နှုတ်ခမ်းတွေမှာ အနီရောင်ရင့်ရင့် နှုတ်ခမ်းနီ တွေ ရဲပတောင်းခတ်လို့နေတယ်။
မျက်နှာ တွေက ချောင်ကျနေပြီး အသားအရေက မွဲခြောက်ခြောက် ရှိနေပေမယ့် သူတို့ အားလုံးက ကျနော့်ကို လျော့တိ လျော့ရဲ ဟန်ဆောင်အပြုံးတွေနဲ့ ကြိုဆိုနေလေရဲ့။ သူတို့ဆီက ဈေးခပ်ပေါပေါ ကုလားရေမွှေးနံ့က နှာခေါင်းထဲအရှိန်ပြင်ပြင်း တိုးဝှေ့ ၀င်လာတယ်။
အသားအရေ အဖြူရောင်သန်းပြီး အရပ် ၅ ပေကျော်နဲ့ ကြည့်ပျော်ရှုပျော်ရုပ်ရည်ရှိတဲ့ အသက် ၂၀ ကျော်အရွယ် မိန်းကလေး တဦးကို ရွေးချယ် ခေါ်ဆောင်ပြီး ရန်ကုန်မြို့ထဲ ဆိပ်ကမ်းသာ လမ်း အထက်ဘလောက် မှာရှိတဲ့ တည်းခိုခန်းတခုကို ရောက်ရှိချိန်မှာ ည ၈ နာရီ လောက်ဖြစ်နေပါပြီ်။ တည်းခိုခန်းက အထပ်မြင့် တိုက်တခုရဲ့ ဒုတိယထပ်မှာ ဖွင့်ထားပြီး အထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ ကိုးပေပတ်လည် အခန်းကျဉ်း အခု ၃၀ လောက်တွေ့ရတယ်။
တချို့အခန်းတွေမှာ မှိန်ပျပျအနီရောင်မီးလုံးကလေးတွေ ထွန်းထားတာတွေ့ရပြီး တချို့အခန်းဝမှာတော့ အတွင်းခံပဲပါတဲ့ ကိုယ်လုံးတီးသာသာ ကောင်မလေးတွေ မတ်တပ်ရပ်ရင်း တစုံတဦးကို စောင့်ဆိုင်းနေဟန် မြင်တွေ့ရတယ်။ နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားတွေမှာပဲ မြင်ခဲ့ဖူးတဲ့ မြင်ကွင်းမျိုးပါ။
တည်းခိုခ အနေနဲ့ အခန်းတခန်းကို နာရီနဲ့ ငှားရင် တနာရီ ကျပ် ၂ ထောင် ကျသင့်မှာဖြစ်ပြီး တညလုံးငှားမယ် ဆိုရင်တော့ ကျပ် ၅၀၀၀ ပေးရမယ်လို့ တည်းခိုခန်း မန်နေဂျာက ပြောတယ်။
ငှားလို့ရတဲ့ အခန်း နံပါတ်၂၁ ရှိရာသွားဖို့ တခြားအခန်းတွေကို ဖြတ်သန်းသွားတဲ့အချိန်မှာ အခန်းကျဉ်း လေးတွေထဲက ညည်းသံသဲ့သဲ့ကြားရတယ်။ ဆေးလိပ်မီးခိုးငွေ့တွေ၊ အရက်နံ့၊ ဘီယာနံ့တွေနဲ့ အပေါစားရေမွှေးနံ့တွေ ထောင်းထောင်း ထလို့နေတယ်။
အခန်းထဲရောက်ချိန်မှာတော့ “ကျမက မိသားစု ၃ ဦး၊ အမေ၊ မောင်လေးနဲ့ ကျမ စုစုပေါင်း ၃ ယောက်ပေါ့။ အဖေက ဆုံးသွားတာကြာပြီ။ မိသားစုဝမ်းရေးအတွက် ကျမ ဒီအလုပ်ကို လုပ်နေတာ” လို့ ကောင်မလေးက လိုရင်းတိုရှင်း မိတ်ဆက် တယ်။ သူ့နာမည် မြဝေတဲ့။
အဲဒီကောင်မလေးက ကြည့်မြင်တိုင် ညဈေးနားက ရပ်ကွက်တခု မှာနေပြီး သူ့အမေကတော့ အသက် ၆၀ကျော် အရွယ် နာတာရှည် ရောဂါခံစားနေရတယ်၊ သူ့ မောင်လေးကတော့ ခြေတဘက် ကျုံလှီနေတဲ့ ပိုလီယို ရောဂါဝေဒနာရှင်လေးဖြစ် တယ်လို့ ရှင်းပြတယ်။
“အမေနဲ့ မောင်လေးအတွက် ဒီအလုပ်မှ မလုပ်ရင် ကျမ ဘယ်လိုမှ လုံလောက်တဲ့ ငွေရှာနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ တညကို အိမ်ကိုပြန်တဲ့ တက္ကစီခ နုတ်ပြီး အနည်းဆုံး ၁၀၀၀၀ လောက်ရမှတနေ့ စားဖို့နဲ့ အမေ့ဆေးဖိုး ကာမိတယ်” လို့ မြဝေက ပြောတယ်။
မြဝေဟာ လိင်ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းမှာ အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ်က စတင်ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အဲဒီအလုပ်မလုပ် ခင်က ကာရာအိုကေဆိုင်တွေနဲ့ အနှိပ်ခန်းတွေမှာ ၁ နှစ်ကျော် ကြာအောင် အလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“ကာရာအိုကေ ဆိုင်မှာ ၃ လလုပ်ဖူးတယ်။ အဓိကလုပ်ရတာက ဆိုင်မှာ သီချင်း လာဆိုရင် အရက်သောက်တဲ့ သူတွေဘေး မှာထိုင် အရက်ငှဲ့ပေး၊ သီချင်းကူဆိုပေးရတယ်။ ဧည့်သည်က သဘောကျရင် ဘောက်ဆူးပေးတယ်။ ဧည့်သည်သဘော ကျအောင် သူတို့ ဟိုကိုင် သည်ကိုင် လုပ်သမျှ ခံရတယ်” လို့ပြောပြတယ်။
ကာရာအိုကေဆိုင်မှာ အလုပ်လုပ်စဉ်က သူ တလ ကျပ် ၁၅၀၀၀ လစာရပြီး၊ ဧည့်သည်ကို ဖျော်ဖြေနေတဲ့ အချိန်မှာ တနာရီ ၄၀၀ ရတယ်လို့ သူကပြောပြတယ်။ ရတဲ့ ဘောက်ဆူးကို တော့ ဆိုင်နဲ့ သူ ငါးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းဆီ ခွဲဝေယူရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“ဧည့်သည်တဦး ကာရာအိုကေဆိုင်မှာ အပန်းလာဖြေရင် ဆိုင်က တနာရီကို ကျပ် ၅၅၀၀ ကစပြီး ၁၅၀၀၀ ထိ ၀န်ဆောင်မှု အလိုက် ဈေးအမျိုးမျိုးယူတယ်။ ဧည့်သည်ကို ဖျော်ဖြေ ပေးရတဲ့ ကျမတို့ကတော့ ငွေနည်းနည်းပဲ ရတယ်။ တလ ကို ကျပ် ၆၀၀၀၀ လောက်ပဲရတော့ မိသားစုအတွက် ဘယ်လိုမှမလုံလောက်ဘူး။ အဲဒါနဲ့ ၀ါးတန်းလမ်းက အနှိပ်ခန်းတခုမှာ အလုပ် သွားလုပ်တယ်” လို့ မြဝေက စိတ်ရှည်လက်ရှည် ရှင်းပြတယ်။
ရန်ကုန်မြို့တော်ရဲ့အချက်အချာကျ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ၀ါးတန်းလမ်းမှာရှိတဲ့ အနှိပ်ခန်းတခုမှာ ၀င်အလုပ်လုပ်လိုက် တာဟာ သူ့ဘ၀ရဲ့အချိုးအကွေ့ကြီးတခု ဖြစ်ပြီး လိင်ဖျော်ဖြေရေး လုပ်ငန်းအတွင်းကို ၀င်ရောက်မိစေတဲ့ ပထမဆုံး ခြေလှမ်း ဖြစ်တယ်လို့ မြဝေက ဆိုပါတယ်။
“အနှိပ်ခန်းမှာ အလုပ်ဝင်ပြီး ၂ ရက်လောက်ကြာတော့ အနှိပ်ခန်း ထောင်ထားတဲ့ မာမီက ညည်း အလုပ်တခု လုပ်ရမယ်၊ ငွေ ၃ သောင်းလောက်ရမယ် လို့ပြောပြီး ဟိုတယ်တခု ပို့ ပေးတယ်” လို့ သူ့ဘ၀ရဲ့ပထမဆုံး လိင်ဖျော်ဖြေမှုပေးခဲ့ရတဲ့ အဖြစ် အပျက်ကို ရှင်းပြတယ်။
မြဝေဟာ ဟိုတယ်မှာ အသက် ၄၀ ကျော်အရွယ် တရုတ်နိုင်ငံသားတဦးနဲ့ တညတာ လိင်ဆက်ဆံ ခဲ့ရပြီး အဲဒီညဟာ သူမ အတွက် ငရဲခန်းတခုကို ရောက်သွားသလို ခံစားရတယ်လို့ သူရဲ့ပထမဆုံး အတွေ့အကြုံကို မဲ့ပြုံးပြုံးရင်း ရှုင်းပြတယ်။
“ဟိုတယ်ရောက်တော့ တရုတ်တယောက်နဲ့ တွေ့ရတယ်။ သူပြောတာ ကျမနားမလည်၊ ကျမပြောတာ သူနားမလည်နဲ့ပေါ့။ ဆက်ဆံတဲ့ အချိန်ကျတော့ ပထမဆုံးဆိုတော့ အရမ်းနာတယ်။ ငိုပြီး တောင်းပန်တာ။ မရဘူး” လို့ မြဝေက ပြောတယ်။
သူမရဲ့ပထမဆုံးလိင်ဆက်ဆံဖက် တရုတ်အမျိုးသားဟာ သူ့ရဲ့လိင်အင်္ဂါကို ပုံမှန်မဟုတ်အောင် ပြုပြင်ထားတာကြောင့် အပျိုစင်တဦးဖြစ်တဲ့ မြဝေအဖို့ အသည်းခိုက်အောင် နာကျင်ခဲ့ရတယ် လို့ ဆိုပါတယ်။
“တိရစ္ဆာန်တကောင်လို ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ ဆက်ဆံခံခဲ့ရတာ။ အဲဒီတရုတ်နဲ့ ဆက်ဆံပြီး ကျမ တပတ်လောက် ကောင်းကောင်း လမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် အခုတော့လည်း ရိုးသွားပြီ” လို့ မြဝေက ရယ်ရယ်မောမောနဲ့ ကျနော့်ကိုပြောတယ်။
မြဝေနဲ့ကျနော် အခန်းကပြန်ထွက်လာချိန်မှာ ည ၁၁ နာရီတိတိရှိနေပြီ။ တည်းခိုခန်း ဧည့်ကြိုကောင်တာမှာ ငွေရှင်းနေတုန်း ရုတ်တရက် ၀တ်စုံပြည့် ၀တ်ဆင်ထားတဲ့ ရဲနှစ်ဦး တည်းခိုခန်းထဲ ၀င်လာတဲ့အတွက် ကျနော်ရော၊ မြဝေပါ ခေါင်းနပန်းကြီး စိုးရိမ်ထိတ်လန့် သွားတယ်။ ဒါပေမယ့် တည်းခိုခန်း မန်နေဂျာကတော့ ကြောက်ရွံ့ဟန် မပြတဲ့အပြင် ရဲတွေကို ဖော်ရွေတဲ့ အပြုံးနဲ့ ဆီးကြိုတာ တွေ့ရတယ်။
“ဆရာတို့ လာပါ။ ထိုင်ပါ” လို့ မန်နေဂျာကပြောပြီး တည်းခိုခန်း ဧည့်ကြို ကောင်တာဘေးက ပလတ်စတစ် ထိုင်ခုံတွေမှာ နေရာချထားပေးလိုက်တယ်။ ခဏအကြာမှာ မန်နေဂျာက ငွေစက္ကူတွေ ထည့်ထားဟန်ရှိတဲ့ ခပ်ထူထူ စာအိတ်ကြီးတလုံး ရဲတွေဆီကို လှမ်းပေး လိုက်တယ်။ အဲဒီနောက် ရဲနှစ်ဦးဟာ မန်နေဂျာကို နှုတ်ဆက်လို့ တည်းခိုခန်းထဲကနေ ထွက်ခွာ သွားပါတယ်။
“မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ ကျနော့်အသိ ရဲတွေပါ” လို့ တည်းခိုခန်း မန်နေဂျာက ကျနော်နဲ့ မြဝေကို ပြောဆိုနှစ်သိမ့်တယ်။ တည်းခိုခန်းက အပြင်ကို ရောက်ရှိချိန်မှာတော့ ည ၁၁ နာရီ ၂၅ မိနစ်ရှိနေပါပြီ။
ရန်ကုန်မြို့တော်မှာ လိင်ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်း ဦးစားပေးလုပ်ကိုင်ကြတဲ့ တည်းခိုခန်း၊ ကာရာအိုကေဆိုင်၊ အနှိပ်ခန်းနဲ့ အလှပြင်ဆိုင်တွေ တနေ့တခြား တိုးပွားများပြား လာတာကို တွေ့နေရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် တည်းခိုခန်း ဖွင့်လှစ် လုပ်ကိုင်သူတွေ အလွန်များပြား လာပါတယ်။
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ကျောက်တံတား၊ ဗိုလ်တထောင်၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်၊ လမ်းမတော်အပါအ၀င် မြို့တွင်း လူဦးရေထူထပ်တဲ့ မြို့နယ်ကစလို့ ရွှေပြည်သာ၊ အင်းစိန်၊ လှိုင်သာယာ၊ ဒဂုံမြို့သစ်လို မြို့ဆင်ခြေဖုံး နေရာတွေမှာ တည်းခိုခန်းတွေကို အရေအတွက် များများ တွေ့ရတယ်။
“အအေးခန်း တည်းခိုရိပ်သာ” ဆိုတဲ့ သဘောတရားက ရပ်ဝေးက လာတဲ့ ဧည့်သည်တွေ ခေတ္တ အဆင်ပြေတည်းခိုစေဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်စေတာ ဆိုပေမယ့် ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ တည်းခိုခန်းတွေက အဲဒီသဘောတရားကို ဖီလာ ဆန့်ကျင်လို့လိင်ဖျော်ဖြေရေး လုပ်ငန်းတွေ အဓိကလုပ်ကိုင်ရာ ဌာနကြီးတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။
“တည်းခိုခန်း လိုင်စင်ရဖို့ စည်ပင်၊ ရဲနဲ့ နယ်မြေ မယက တွေရဲ့ ထောက်ခံချက်တွေ အများကြီး ယူရတယ်။ လွယ်လွယ်နဲ့ မရဘူး” လို့ အင်းစိန်မြို့နယ်က တည်းခိုခန်း ပိုင်ရှင်တဦးက ပြောတယ်။
တည်းခိုခန်း လိုင်စင်လွယ်လွယ်မရနိုင်ဘူး ဆိုပေမယ့် ရန်ကုန်မြို့မှာ “အအေးခန်း တည်းခိုရိပ်သာ”၊ “တည်းခိုရိပ်မွန်”၊ “ဧည့်ရိပ်သာစခန်း” စတဲ့ နာမည်ဆိုင်းဘုတ်တွေတပ်ပြီး ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ တည်းခိုခန်း ထောင်ပေါင်းများစွာ ရှိပါတယ်။ ဒီတည်းခိုတွေမှာ နေ့ရော၊ ညပါ လိင်ဖျော်ဖြေရေး လုပ်ကိုင်တဲ့ ဆယ်ကျော်သက်နဲ့ အရွယ်စုံ ပြည့်တန်ဆာတွေ အများအပြား ရနိုင်တယ်လို့ ရန်ကုန်မြို့ခံ လူငယ်တွေက ပြောပါတယ်။
“လိုင်းကြေးဆိုတာရှိတယ်။ တည်းခိုခန်းဖွင့်ထားတဲ့ မြို့နယ်ကိုလိုက်ပြီး လိုင်းကြေးက အနည်းဆုံး တလ ၃ သိန်းကနေ ၁၀ သိန်းထိရှိတယ်” လို့ တည်းခိုခန်းမှာ ၀င်ရောက် အလုပ်လုပ်ဖူးတဲ့ ရန်ကုန်မြို့သားလူငယ်တဦးက ပြောပြတယ်။
တည်းခိုခန်းတွေဟာ ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် ရဲစခန်းတွေနဲ့ တိုက်ရိုက် အဆက်အသွယ်ရှိပြီး တကယ်လို့ တိုင်းရဲ တပ်ဖွဲ့ရဲ့ ရှောင်တခင်စစ်ဆေးမှုတွေ ရှိမယ်ဆိုရင် မြို့နယ်ရဲစခန်းတွေက အကြောင်းကြားပေးတာကြောင့် ပြည့်တန်ဆာတွေ ကြိုတင် ဖယ်ရှားကြတဲ့အတွက် ဖမ်းဆီးအရေးယူဖို့ ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး လို့ အဲဒီလူငယ်ကဆိုတယ်။
“အောက်ခြေ မြို့နယ်ရဲနဲ့ အပိုင်ပေါင်းထားတော့ အထက်ကဘယ်လောက်ပဲ စစ်ဆေးရေးတွေ လုပ်လုပ် လွတ်ကြတာများ တယ်”လို့ လှိုင်သာယာ ဒဂုံဧရာအဝေးပြေး ၀န်းအနီးက ရွှေကောင်းကင် တည်းခိုခန်းမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ လူငယ်တဦးက ပြောပြတယ်။
တည်းခိုခန်းတွေဟာ အရွယ်စုံပြည့်တန်ဆာ အမျိုးသမီးတွေနဲ့ အဆက်အသွယ်ရှိပြီး တချို့တည်းခိုခန်း တွေကတော့ ကိုယ်ပိုင်ပြည့်တန်ဆာတွေ ထားကြတယ်လို့ တည်းခိုခန်း လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့ စီးပွားရေးသမားတွေနဲ့ နီးစပ်သူတွေက ပြောပြတယ်။
“အများစုကတော့ ပစ္စည်းတွေ (ပြည့်တန်ဆာ) နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး လုပ်ကြတာ။ အကောင်ကြီးကြီး (ရာထူးကြီးမားသည့် စစ်အရာရှိ၊ ရဲအရာရှိများ) တွေနဲ့ ပိုင်တဲ့ တည်းခိုခန်းတွေကတော့ ကိုယ်ပိုင် ပစ္စည်းတွေမွေးထားတယ်” လို့ လမ်းမတော်မြို့ နယ်အတွင်းမှာ တည်းခိုခန်း ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ စီးပွားရေးသမားတဦးနဲ့နီးစပ်သူ တဦးက ရှင်းပြတယ်။
လိင်ဖျော်ဖြေရေး အဓိကထားလုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ တည်းခိုခန်းတွေဟာ တနေ့ကို ငွေ ကျပ် ၇ သိန်း ကျော်အမြတ်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
“တည်းခိုခန်းရဲ့ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ လုပ်နိုင်စွမ်းပေါ်မှာ မူတည်ပြီး အမြတ်က မတူဘူး။ သာမန် ပစ္စည်းတွေခေါ်ပေးပြီး အခန်းငှား တဲ့ တည်းခိုခန်းတခု ဆိုရင်တောင် အမြတ်ငွေ ၅ သိန်းနဲ့ ၇ သိန်းလောက် ၀င်ငွေရှိတယ်။ လုပ်ငန်းအကြီး (ကိုယ်ပိုင် ပြည့်တန်ဆာရှိပြီး အခန်း ၅၀ အထက်ရှိတဲ့ တည်းခိုခန်း)လုပ်နိုင်တဲ့ သူတွေရဲ့ အမြတ်ကတော့ ကျပ်သိန်း ဆယ်ဂဏန်း အထက်မှာရှိတယ်” လို့ ရန်ကုန်မြို့ခံ ကားပွဲစားတဦးက ဆိုပါတယ်။
တည်းခိုခန်းတွေလိုပဲ လိင်ဖျော်ဖြေရေးအဓိကထားလုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ကာရာအိုကေ ဆိုင်တွေ၊ အနှိပ်ခန်းတွေ၊ အလှပြင်ဆိုင် တွေလည်း အမြတ်ငွေ တနေ့ သိန်းဆယ်ဂဏန်း အထက်မှာ ရှိတယ်လို့ အဲဒီကားပွဲစားက ရှင်းပြတယ်။
“နိုက်ကလပ်တွေ၊ ဘားတွေလည်း ပစ္စည်းတွေနဲ့ စီးပွားရှာရတာပဲ။ ဒါပေမယ့် ကလပ်နဲ့ ဘားကျတော့ လူကြီး သားသမီးတွေ နဲ့ ချမ်းသာတဲ့သူတွေပဲ အဓိကလာကြတယ်။ ရန်ကုန်မြို့မှာနိုက်ကလပ်နဲ့ ဘားတွေက လက်ချိုးရေလို့ရအောင် နည်းတယ်” လို့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ နာမည်ကျော် ပိုင်အိုးနီးယားကလပ်က စားပွဲထိုး လူငယ်တဦးက ပြောပြတယ်။
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အပါအဝင် အသက်အရွယ်မျိုး စုံပြည့်တန်ဆာတွေကို တည်းခိုခန်း၊ ကာရာအိုကေ၊ အလှပြင်ဆိုင်၊ နိုက်ကလပ်နဲ့ ဘားတွေမှာသာ မကရန်ကုန်မြို့တော်ရဲ့ လမ်းမကြီးတွေ၊ ပန်းခြံတွေ၊ ရုပ်ရှင်ရုံတွေ ကားဂိတ်တွေ၊ စားသောက်ဆိုင်တွေနဲ့ လူစည်ကားရာ ဈေးတွေမှာလည်း အလွယ်တကူ ရှာဖွေ တွေ့နိုင်တယ်လို့ ရန်ကုန်မြို့ခံ ကားပွဲစား တွေနဲ့ တက္ကစီအငှားယာဉ် ဒရိုင်ဘာတွေက ပြောပါတယ်။
“မြို့ထဲမှာဆိုရင် လမ်း၄၀၊ ပန်းဆိုးတန်း၊ သိမ်ကြီးဈေးတ၀ိုက်။ ပြီးတော့ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးနဲ့ သွင်၊ ၀ဇီရာ၊ ဆုထူးပန်၊ မြို့မနဲ့ တခြားရုပ်ရှင်ရုံအောက်တွေမှာ နေ့ရောညပါ ဇယားတွေ (ပြည့်တန်ဆာတွေ) ရှိတယ်” လို့ အင်းစိန်မြို့နယ်မှာ နေထိုင်တဲ့ တက္ကစီ ဒရိုင်ဘာတဦးက ပြောပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့လမ်းမတွေနဲ့ လူစည်ကားရာ နေရာတွေမှာ တွေ့ရတဲ့ ပြည့်တန်ဆာတွေ ကတော့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် မိန်းကလေးတွေ အများဆုံးဖြစ်ပြီး သူတို့တွေရဲ့ အသွင်အပြင်က ပြည့်တန်ဆာမှန်း မြင်ရုံနဲ့ သိနိုင်တယ်လို့ ဟံသာဝတီ ကားပွဲစား တန်းက ပွဲစားတဦးက ရှင်းပြတယ်။
သောင်းဂဏန်းချီရှိနေတဲ့ ရန်ကုန်မြို့လမ်းမတွေပေါ်က ပြည့်တန်ဆာတွေရဲ့ ဘ၀ကလည်း လွယ်ကူလှတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဧည့်သည်ရဖို့ ကြိုးစားရင်း ရဲတွေရဲ့အဖမ်းအဆီးကို လွတ်အောင်ရှောင်ရတယ်လို့ ကမ္ဘာအေး ဘုရားလမ်း၊ မြကျွန်းသာပန်းခြံနားမှာ ပုံမှန် အလုပ်လုပ်လေ့ရှိတဲ့ အသက် ၂၀ ကျော်အမျိုးသမီးငယ်လေး တဦးက ပြောပြတယ်။
“ရဲကိုလည်း ရှောင်ရ၊ မူးရူးပြီးအုပ်စုလိုက် ငွေမပေးဘဲ ဆက်ဆံတဲ့ သူတွေလည်း ရှောင်ရတယ်။ အရှောင်မတတ်လို့ လွန်ခဲတဲ့ လက ကျမ ရဲဖမ်းခံရတယ်။ ငွေ ၇ သောင်း ပေးပြီးပြန်လွတ်လာတာ။ ငွေမပေးနိုင်တဲ့ ကျမ သူငယ်ချင်းတွေကတော့ ပုဒ်မ ၃ (ခ) ပြည့်တန်ဆာပုဒ်မနဲ့ ထောင်ဒဏ် တနှစ်ထိကျကုန်တယ်” လို့ အဲဒီအမျိုးသမီးက ဆိုပါတယ်။
ပြည့်တန်ဆာတွေဟာ ခုခံအားကျဆင်းမှုရောဂါအကြောင်း သိရှိနားလည်ကြပြီး ဧည့်သည်နဲ့ လိင်ဆက်ဆံတဲ့ အခါမှာ ကွန်ဒုံး အသုံးပြုခိုင်းတယ်လို့ ကျနော်မေးမြန်းခဲ့တဲ့ ပြည့်တန်ဆာ ၂၀ ကျော်ကပြောတယ်။
“ကွိုင်(ကွန်ဒုံး) သုံးခိုင်းတယ်။ ကွိုင်မသုံးရင် ကျမကတော့ မဆက်ဆံဘူး။ ဒါပေမယ့် တခါတလေ အရမ်းမူးနေတဲ့သူတွေ ဆိုရင် ပြောမရ ဆိုမရနဲ့ ဆက်ဆံခံရတာမျိုးကတော့ ခြွင်းချက်ပေါ့” လို့ အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ် လှိုင်သာယာ မြို့နယ်က အမျိုးသမီးတဦးက ဆိုပါတယ်။
နာဂစ်မုန်တိုင်း တိုက်ခတ်ပြီးနောက်ပိုင်း ရန်ကုန်မြို့မှာ ဆယ်ကျော်သက် ပြည့်တန်ဆာ အမျိုးသမီးတွေ ပိုမို များပြားလာ တာကို တွေ့ရပြီး ဈေးလည်း ကျလာတယ်လို့ သူက ဆက်ပြောပါတယ်။
“အပြိုင်အဆိုင် ဧည့်သည်ရှာရတယ်။ အရင်တုန်းက တခါဆက်ဆံရင် ကျပ် ၄၅၀၀၊ ၅၀၀၀ အခုတော့ ၃၀၀၀ ဆိုရင်လည်း လိုက်ရတာပဲ။ အဲလိုမှမလိုက်ရင် အလုပ်မဖြစ်ဘူး။ တချို့ဆိုရင် ထမင်းကျွေးရင် တော်ပြီဆိုပြီး လိုက်တဲ့သူတွေတောင် ရှိနေတော့ ဈေုး အရမ်းကိုင်လို့မရဘူး” လို့ အဲဒီ အမျိုးသမီးကပြောပြပါတယ်။
မြန်မာ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ရောင်းချရေး သဘောတူလက်မှတ် ရေးထိုး
၀ီလီယံဘွတ် ဇူလိုင် ၄၊ ၂၀၀၈
နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှ သိန်းနှင့်ချီသည့် ကပ်ဘေးဒုက္ခသည်များက အကူအညီ အနည်းအကျဉ်း မျှနှင့် ရပ်တည်မှုအတွက် ကြိုးပမ်းနေရစဉ် မြန်မာစစ်အစိုးရမှာမူ ၎င်းတို့၏ ပင်မငွေဝင် လမ်းဖြစ်နေသည့် သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ အရင်းအမြစ်များကို ထုတ်ရောင်းရန် ပြင်ဆင်လျှက် ရှိသည်။
စစ်အစိုးရက ဦးစီးလုပ်ကိုင်နေသည့် မြန်မာ့ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း (MOGE) က ယခုအပတ်တွင် အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံသို့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့များ ပိုမိုရောင်းချပေးရေးအတွက် သဘောတူညီမှု စာချုပ်တရပ် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပြီး မထုတ်လုပ်ရသေးသည့် အကွက်အသစ်ဖြစ်သော မုတ္တမကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်ရှိ အမ် - ၉ လုပ်ကွက်မှနေ၍ တင်ပို့ ရောင်းချရလိမ့်မည် ဖြစ်သည်။
၎င်းသဘာဝဓာတ်ငွေ့များကို ထိုင်းနိုင်ငံက တိုးချဲ့ထုတ်လုပ်မည့် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုမည့် အချိန်တွင် မြန်မာပြည်သူများမှာမူ လောင်စာလျှပ်စစ် မသုံးနိုင်ကြဘဲ အမှောင်ထဲရှိနေကြရဆဲ ဖြစ်သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ အဓိကစွမ်းအင် ရှာဖွေထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်သည့် PTTEP ကုမ္ပဏီ၏ အဆင့်မြင့်အမှုဆောင်တဦး က ယခုအပတ်အတွင်း ထိုင်းအစိုးရ ခေါင်းဆောင်များ မြန်မာနိုင်ငံသို့ သွားရောက်၍ သဘောတူစာချုပ်ကို လက်မှတ် ရေးထိုးကြလိမ့်မည်ဟု ပြောကြားသည်။ (PTTEP) ကုမ္ပဏီက စစ်အစိုးရသို့ မည်မျှငွေကြေးပေးဆောင်ရလိမ့်မည်ကို အသေးစိတ် ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ခြင်း မရှိပါ။
ဤသဘောတူစာချုပ်ကိုသာ ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ပါက တနေ့လျင် အနည်းဆုံး သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ကုဗမီတာ သန်း ၃၀၀ ကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ထုတ်လုပ်တင်သွင်းနိုင်လိမ့်မည် ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ တောင်ပိုင်းကိုဖြတ်၍ အသစ် ဖောက်လုပ်မည့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းသစ်မှနေ၍ ၎င်းဓာတ်ငွေ့များ၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ထိုင်းနိုင်ငံသို့ တင်သွင်း နိုင်ပေလိမ့်မည်။
ထိုင်းနိုင်ငံသည် ယခုအချိန်တွင်ပင် မြန်မာနိုင်ငံမှ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ အများဆုံး ၀ယ်ယူနေသည့် နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ မြန်မာ့ အရေး လေ့လာစောင့်ကြည့်နေသူ၊ သြစတြေးလျနိုင်ငံ မက်ကွိုင်းယားတက္ကသိုလ်မှ စီးပွားရေးပညာပါမောက္ခ ရှောင်တာနဲ ၏ ခန့်မှန်းချက်အရ မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်များက သဘာဝဓာတ်ငွေ့တင်ပို့ရောင်းချမှုမှနေ၍ အနည်းဆုံးတလလျင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ ၀င်ငွေရှိနေသည်ဟု ဆိုသည်။
သဘာဝဓာတ်ငွေ့ တင်ပို့ရောင်းချမှုမှနေ၍ မြန်မာနိုင်ငံက ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံခြားဝင်ငွေအများဆုံးရရှိခဲ့ပြီး စစ်အစိုးရက ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သော စာရင်းများအရ နိုင်ငံခြားတင်ပို့မှုမှ ၀င်ငွေစုစုပေါင်း သန်း ၈၇၀၀ ၏ တ၀က်ခန့်မှာ သဘာဝဓာတ် ငွေ့ တင်ပို့ရောင်းချမှုမှ ရရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“မြန်မာနိုင်ငံ သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းတခုလုံးကို လျှို့ဝှက်ပြီး လူမသိ သူမသိ ကြိတ်ပုန်းလုပ်နေကြတယ်။ ဒီလုပ်ငန်း ကနေ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေ ဘယ်လောက် အမြတ်ထုတ်နေကြတယ်ဆိုတာ သေချာမသိနိုင်ဘူး” ဟု ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက် မြို့နေ စွမ်းအင်လုပ်ငန်း အကြံပေး ကောလင်း ရေးနိုးလ်က ပြောသည်။
“ဒါပေမယ့် သေချာပြောလို့ရတာတခုကတော့ ဒီလုပ်ငန်းက အမြန်ကြီးထွား ချဲ့ထွင်လာနေတယ်။ အခုနောက်ထပ် တူးဖော်မှုတွေမှာလည်း ဓာတ်ငွေ့ရဖို့က သေချာသလောက်ရှိနေတော့ ဆက်ကြီးထွားဖို့ ရှိနေတယ်” ဟု သူက ဆိုသည်။
“ဒါပေမယ့် ကမောက်ကမ ဖြစ်ရပ်တွေလည်း ရှိသေးတယ်။ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း တိုက်ခတ်ပြီး ကုန်းတွင်းပိုင်းမှာ အကြီးအကျယ်ပျက်စီးခဲ့ပေမယ့် ဓာတ်ငွေ့တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေက ဘာမှမထိခိုက်ဘဲ ကျန်ရစ်နေခဲ့တယ်” ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
ဓာတ်ငွေ့ရောင်းချရေးအတွက် PTTEP နှင့် သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးတော့မည့် ကာလမှာပင် အာဆီယံအဖွဲ့၊ ကုလ သမဂ္ဂနှင့် မြန်မာ အာဏာပိုင်များ ပူးပေါင်းထားသည့် သုံးပွင့်ဆိုင်အုပ်စု မှနေ၍ ဆိုင်ကလုန်း နာဂစ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပျက်စီးရမှုများအပေါ် အကဲဖြတ်စစ်ဆေးချက် ကြားဖြတ်အစီရင်ခံစာကို ရန်ကုန်တွင် တင်သွင်းလိမ့်မည် ဖြစ်သည်။
ဤအကဲဖြတ်စစ်ဆေးချက် အစီရင်ခံစာကို ဇူလိုင်လတွင် နောက်ဆုံးအချောသတ်မည်ဖြစ်ပြီး ပြောဆိုချက်များအရ ဤအစီ ရင်ခံစာက တွေ့ရှိခဲ့ရာတွင် မုန်တိုင်းဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသည့် ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ရှိ ရွာပေါင်း ၃၈၀ ကျော်တွင် သိုလှောင် သိမ်းဆည်းထားသည့် စားနပ်ရိက္ခာ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ပျက်စီးခဲ့ရသည်ဟု ဆိုပါသည်။ ထို့ပြင် မုန်တိုင်းကပ်ဘေးဒဏ် သင့်ခဲ့ရသူ လူဦးရေ၏ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းမှာလည်း အကူအညီလိုအပ်နေသည်ဟု ဆိုပါသည်။
အချို့သော အစိုးရမဟုတ်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ တွက်ချက်မှုအရ လူပေါင်း ၂. ၄ သန်းမှာ ကူညီထောက်ပံ့မှုများ လိုအပ်နေပါသည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရက အကူအညီတင်ပြတောင်းခံခဲ့ပြီးနောက် နိုင်ငံရပ်ခြားအစိုးရများက ကူညီပေးမည်ဟု ကတိက၀တ်ပြု ချက်အရ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၂၀၀ ထက်အနည်းမျှသာ ပို၍ ရရှိထားပါသေးသည်။ သို့သော်လည်း မြန်မာ့စီးပွားရေး လေ့လာစောင့်ကြည့်ရေး (Burma Economic Watch) စာစောင် ထုတ်ဝေနေသူ ရှောင်တာနဲ၏ တွက်ချက်မှုအရ မြန်မာစစ် အစိုးရတွင် သဘာဝဓာတ်ငွေ့တင်ပို့ရောင်းချငွေမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၄၀၀၀ ကျော် ရရှိထားသည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါ သည်။
PTTEP ကုမ္ပဏီ၏ တွက်ချက်မှုအရ အမ် - ၉ လုပ်ကွက်တွင် အနည်းဆုံး သဘာဝဓာတ်ငွေ ၁. ၇၆ ထရီလီယံ ကုဗပေ ရှိနေ နိုင်ပြီး ထိုမျှထက်မက ပို၍လည်း ရှိနေနိုင်ပါသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံက ဤဓာတ်ငွေ့ဝယ်ယူရေးသဘောတူညီချက်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ ကမ်းလွန်ရေနံတူးဖော်ရေး ကော်ပိုရေးရှင်း ကိုလည်း ပါဝင်စေရန် သဘော တူညီခဲ့ပါသည်။
ဤအချိန်မှာပင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်-မြန်မာနယ်စပ်ရှိ ပို၍ကြီးသော ရွှေသဘာဝဓာတ်ငွေ့သိုက်မှ ဓာတ်ငွေ့ရရှိနိုင်သည့် အလား အလာကောင်းများဆိုင်ရာ အချက်အလက်အသေးစိတ်များလည်း ဆက်လက်ပေါ်ထွက်လာနေပါသည်။
တွေ့ရှိချက်များအရ ဤဓာတ်ငွေ့သိုက်တွင် ဓာတ်ငွေ့ ၆ ထရီလီယံကုဗပေ ရှိနေပြီး တရုတ်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့ရောင်းချရန် ရည် ရွယ်ထားကြောင်း ပင်မတူးဖော်ရေးတာဝန်ယူထားသူ ဒေ၀ူးကုမ္ပဏီက ယခုအပတ်တွင် အတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါသည်။
တွေ့ရှိထားသည့်ဓာတ်ငွေ့များကို တရုတ်နိုင်ငံသို့ရောင်းချရန် ဓာတ်ငွေ့တူးဖော်ခဲ့သည့် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံပိုင် ဤဒေ၀ူး ကုမ္ပဏီမှာ ဖိအားပေးခံခဲ့ရပြီး ယခုအခါ ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်ရေး စင်များဆောက်ရန်၊ ကမ်းရိုးတန်းသို့ ပိုက်လိုင်းသွယ်တန်း ရန်အတွက် အပြိုင်အဆိုင် တင်ဒါများခေါ်ယူနေပြီ ဖြစ်သည်။ ဤဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းက စစ်တွေဆိပ်ကမ်းကို ဖြတ်သန်းဖွယ် ရှိနေပြီး စစ်တွေဆိပ်ကမ်းတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်လည်း အိန္ဒိယကုမ္ပဏီများက တာဝန်ယူတည်ဆောက်နေကြပါသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ်သို့ သွယ်တန်းရောင်းချမည့် ကီလိုမီတာ ၁၀၀၀ ကျော် ရှည်လျားသည့် ဤဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း တည်ဆောက်ရေးတွင် တရုတ်နိုင်ငံမှ အမျိုးသားရေနံ ကော်ပိုရေးရှင်း နှင့် အတူ ဒေ၀ူးကုမ္ပဏီကလည်း ကြီးကြပ်သွားဖွယ် ရှိနေပါသည်။
ဒေ၀ူးနှင့် တောင်ကိုရီးယားအစိုးရကမူ ရွှေသဘာဝဓာတ်ငွေ့သိုက်မှ ဓာတ်ငွေ့များကို အရည်အဖြစ်အသွင်ပြောင်း၍ သင်္ဘော ဖြင့် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသို့ တင်ပို့လိုကြသည်။ ဒေ၀ူးကုမ္ပဏီက သဘောတူညီချက်များတွင် ပါဝင်ခွင့် မရသော်လည်း၊ သဘောတူညီချက် ပြင်ပမှနေ၍ အကောင်းဆုံး ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံထုတ် သတင်းစာ ချွန်ဂန် အီဘိုက ယခုအပါတ်အတွက် ကုမ္ပဏီ အရာရှိများကို ကိုးကားဖော်ပြခဲ့ရာ၌ အကယ်၍ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ဓာတ်ငွေ့စတင်ပို့လွှတ်နိုင်မည်ဆိုပါက လာမည့် ၂၅ နှစ်အတွင်း အမြတ်ငွေ သန်း ၁၀၀၀ ကျော် ရရှိရန် ခန့်မှန်းထားသည်ဟု ဆိုပါသည်။
ဤသဘာဝဓာတ်ငွေ့ရောင်းချရာမှ ရရှိလာမည့် အကျိုးအမြတ်ဘဏ္ဍာငွေများမှာ လူထု၏ အိပ်အတွင်းရောက်လာရန် မရှိဘဲ၊ စစ်ဗိုလ်ချုပ်များသာ ချယ်လှယ်နေဖွယ် ရှိပါသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့်ပင် သူတို့က ထပ်မံတိုးချဲ့လာနေပြီး အိမ်နီးချင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံအတွက်လည်း စိုးရိမ်ပူပန်ဖွယ် ဖြစ်လာနေရပါသည်။ သဘာဝဓာတ်ငွေ့များ အမြောက်အများ ရှိနေနိုင် သည့် ရွှေသဘာဝဓာတ်ငွေ့သိုက်၏ အနောက်ဘက် ပင်လယ်ပြင်ဒေသများသည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနှင့် အငြင်းပွားနေဆဲ ဖြစ်သော ရေပိုင်နက်ဖြစ်ပါသည်။
ဤသို့ အငြင်းပွားနေဆဲ ဇုန်အတွင်း၌ ဓာတ်ငွေ့ထုတ်ရန် လိုင်စင်ချပေးခဲ့သည့် ဒက္ကာအစိုးရကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနက ကန့်ကွက်စာတစောင် ပေးပို့ထားခဲ့ပါသည်။ မေလတွင် တင်ဒါခေါ်ယူခဲ့ပြီးနောက် ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်လိုကြသည့် နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီကြီးများက တန်းစီ စောင့်ဆိုင်းနေကြပါသည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ၏ အစိုးရပိုင် ရေနံကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် ပက်ထရိုဘင်္ဂလားက ယခုအခါ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အတွင်း အသစ်တူးဖော်တည်ဆောက်နေမှုများကို ဆိုင်းငံ့ထားစေပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံအပါအ၀င် ၃ နိုင်ငံ အစည်းအဝေးတရပ် ခေါ်ယူ ရန် တင်ပြအဆိုပြုထားခဲ့ပါသည်။
ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်း မိုးကြီး၍ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲ
ကိုစိုး ဇူလိုင် ၄၊ ၂၀၀၈
ရခိုင်ပြည်နယ် ဘူးသီးတောင်-မောင်းတောသွားကားလမ်းသည် ၇ ရက်ခန့် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းသည့် အတွက် လွန်ခဲ့သော ၃ ရက်ခန့်က စတင်၍ တောင်ပြိုပြီး လမ်းပိတ်နေသောကြောင့် ဒေသခံပြည်သူများ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲနေကြောင်း သိရှိရသည်။
ယင်းသို့ တောင်ပြိုသောကြောင့် ဘူးသီးတောင်နှင့်မောင်းတောသွား ကားလမ်းတွင် ၃ နေရာခန့် လမ်းပိတ်နေပြီး တံတား တခုလည်း ပျက်စီးသွားသည်ဟု ဒေသခံ တဦးက ပြောသည်။
“မိုး ၇ ရက်လောက် ဆက်တိုက် တအားရွာတာ တောင်ပြိုပြီး ဘူးသီးတောင်နဲ့ မောင်တောမှာ လမ်းက သုံးပိုင်း ပိတ်သွား တယ်၊ ၇ မိုင်နားမှာ တခု ၊ တောင်ခေါင်းကြီးနားမှာ တခု ၊ ဘူးသီးတောင်နားမှာ တခု၊ တောင်ပြိုကျ ပြီး ပိတ်နေတာ၊ သုံး ရက်လောက် ရှိနေပြီ၊ လူတွေတော့ ဘာမှ မဖြစ်ဘူး၊ လူတွေက တဘက်ကနေ တဘက် ကို လမ်းလျှောက်သွားရတယ်၊ ကားလုံးဝ ဖြတ်လို့မရဘူး”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ဘူးသီးတောင်နှင့် မောင်းတောသွား ကားလမ်းသည် ၁၆ မိုင်ခန့်ရှိပြီး တံတား ကြီး ၇ စင်းခန့်ရှိရာ ၇ မိုင်အနီးရှိ တံတား တခုမှာ ပျက်စီးသွားသောကြောင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ တပတ်အတွင်း ပြန်လည်ကောင်းမွန် နိုင်ရန် မလွယ်ကူကြောင်းလည်း သိရသည်။
“သက်ဆိုင်ရာကတော့ လမ်းပိတ်တာတွေကို နည်းနည်းပါးပါးလာရှင်းနေတာ ရှိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် တ ရက် နှစ် ရက်နဲ့ မပြီးနိုင်ဘူး၊ ၇ မိုင် မှာ ချောင်းဖြတ်ဆောက်ထားတဲ့ တံတားက ပိုကြာနိုင်တယ်၊ အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကတည်း ဆောက်ခဲ့တဲ့ တံတား၊ အဲဒီ တံတားက မနှစ်ကလည်း တခါ ရေတိုက်စားပြီး ယိုင်ထားတာ၊ ကားတွေ သွားလို့လာ လို့ ရဖို့ ဆိုရင် တပတ် ဆယ့်ငါးရက်လောက် ကြာနိုင်တယ်” ဟု လည်း အထက်ပါ ဒေသခံက ပြောပြသည်။
ထိုသို့ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုကြောင့် မောင်တောတွင် လူ၏ ခါးလယ်ခန့် ရေများတက်ခဲ့ကြောင်း၊ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲသွားပြီး ကုန်ဈေးနှုန်း တချို့တက်သွားကြောင်း မောင်းတောမြို့မှ သံဃာတော်တပါးက ပြောသည်။
“ဘူးသီးတောင်က လာလို့ရှိရင် မြို့အဝင်နားကနေစ လမ်းလျှောက်ရတယ်၊ အဲဒီ ၇ မိုင်နားကျမှ ဘတ်စ်ကားက သွားလို့ရ တယ်၊ ဘူးသီးတောင်ကလာရင် ဒီဘက် ဆင်စခန်းမှာလည်း တောင်ပြိုကျပြီး လမ်းက ပိတ်နေတယ်၊ တောင်ခေါင်းကြီး ဆိုတာ ၉ မိုင်မှာ ရှိတယ်၊ အဲဒီမှာလည်း ပိတ်နေတယ်၊ အခုထိ လမ်းပိတ်နေတုန်းပဲ၊ တချို့ ကုန်သည်တွေက ကုန်ပစ္စည်း တွေကို လူတွေနဲ့ ဟိုဘက် ဒီဘက် ထမ်းသယ်ရတယ်၊ တနာရီခွဲ ၂ နာရီလောက် လမ်းလျှောက်ရမယ်၊ ကုန်ဈေးနှုန်းက လောလောဆယ် ဆန်တပြည်ကို ကျပ် ၂၀၀-၃၀၀လောက် တော့ တက် သွားတယ်”ဟု ယင်းသံဃာတော်က ပြောပြသည်။
ယမန်နှစ်ကလည်း ယခုကဲ့သို့ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းပြီး တံတားပျက်စီးမှုကြောင့် ဘူးသီးတောင်-မောင်းတော လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးသည် တလ ခန့် ခက်ခဲကြန့်ကြမှုများ ဖြစ်ခဲ့ဖူးကြောင်း သိရသည်။
ဧရာဝတီ ဇူလိုင် ၄၊ ၂၀၀၈
ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်မြို့ဖြစ်သည့် မဲဆောက်မြို့နှင့် တာ့ခ်မြို့တို့ကိုဆက်သွယ်သည့် မီးရထားလမ်းဖောက်လုပ်ရန် တာ့ခ်ခရိုင် အာဏာပိုင်တို့ စီစဉ်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ရထားလမ်းဖောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းကြောင့် တာ့ခ်ခရိုင်ဒေသတခုလုံး၏ ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများကို မြှင့်တင်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ထိုင်း-မြန်မာ ၂ နိုင်ငံတို့မှတဆင့် အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၏ အရှေ့ အနောက် စီးပွားရေးစင်္ကြံလမ်းကြောင်း (East-West Economic Corridor) အစီအစဉ်ကို အကောင်အထည် ဖော်နိုင်လိမ့်မည်ဟု တာ့ခ်ခရိုင် စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ ဥက္ကဌ က ပြောသည်။
“ရထားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်းက မဲဆောက်ဒေသရဲ့ စက်မှုလုပ်ငန်းနဲ့ စီပွားရေးဇုန် စီမံကိန်းတွေကို အနာဂတ်မှာ အထောက် အပံ့ ဖြစ်စေမှာပါ” ဟု ၎င်းကဆက်ပြောသည်။
လမ်းဖောက်ရေးစီမံကိန်းကို အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်က အဓိကထားပံ့ပိုးကူညီမည်ဖြစ်ပြီး ရထားလမ်း ဖောက်လုပ်ပြီးစီးချိန်တွင် အရှေ့ အနောက် စီးပွားရေးစင်္ကြံလမ်းကြောင်း သဘောတူညီချက်အရ ဗီယက်နမ်၊ လာအိုနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့မှ ထွက်ကုန်များ ကို မြန်မာနိုင်ငံ ကပ္ပလီပင်လယ်ရှိ ကမ်းရိုးတမ်းဆိပ်ကမ်းများမှတဆင့် ရေလမ်းဖြင့် နေရာဒေသ အနှံ့အပြားသို့ ကုန်ပစ္စည်း များ ပို့ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ရထားလမ်းဖောက်လုပ်ပြီးစီးပါက အနာဂတ်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းများကို အထောက်အပံ့ ဖြစ်စေမည့် နေရာသစ်တခုဖြစ်လာမည်ဟု တာ့ခ်ခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ပြောသည်။
တာ့ခ်ခရိုင် ဒေသတခုလုံး၏ ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများမြှင့်တင်နိုင်ရန်အတွက် ရထားလမ်းဖောက်လုပ်ရေး စီမံကိန်းတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ထိုင်းအမျိုးသား စီးပွားရေးနှင့် လူမှုအကြံပေးကောင်စီအား တာ့ခ်ခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကလည်း အဆိုပြုခဲ့သည်။
ရထားလမ်းဖောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်းပေါင်း ၉၄၀ ကုန်ကျမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရထားလမ်းဖောက်လုပ်ရာ၌ ၁၈ မိုင် ရှည်လျားသည့် ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းတခုကို ဖောက်လုပ်မည်ဖြစ်ပြီး ကားလမ်းဖြင့် ၅၅ မိုင်အကွာအဝေး ခရီးသည် ရထားဖြင့် ၄၄ မိုင်သာ ရှိတော့မည် ဖြစ်သည်။
တာ့ခ်-မဲဆောက် မီးရထားလမ်း ဖောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် တရုတ်အစိုးရကိုလည်း ဖိတ်ခေါ်ထားကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ရာဝတီတိုင်း ရေလုပ်ငန်း နာလန်မထူနိုင်သေး
NEJ/ ၄ ဇူလိုင် ၂၀၀၈
ဒေးဒရဲအပိုင် ပင်လယ်ဝ ကျေးရွာတခုမှ လှေပျက်စီးနေသည့် တံငါတဲတခု
နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ခံလိုက်ရသည့် ဧရာဝတီတိုင်း၏ ရေလုပ်ငန်းသည် အချိန်တိုအတွင်း နာလန်ထူ နိုင်ဦးမည်မဟုတ်ဟု နိုင်ငံခြားသို့ ငါး၊ ပုစွန်တင်ပို့နေသည့် အအေးခန်းလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ဇွန်လကဆို ကျနော်တို့အအေးခန်းစက်ရုံကနေ ဧရာဝတီတိုင်းထွက် တိုင်းဂါး ပုစွန်တွေ ပုံးပေါင်းရာနဲ့ချီ ပို့ခဲ့ရတယ်။ ဒီနှစ် မုန်တိုင်းဒဏ်ခံလိုက်ရလို့ (၂) လရှိလာတဲ့ အခုအချိန် အထိ ပုစွန်တွေ တက်လာတာ လုံးဝမရှိသေးဘူး။ လက်ရှိ ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်က တက်လာတဲ့ ပုစွန်တွေကိုပဲ ပြည်ပတင်နေရတယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းက ရေထွက်ကုန်ဟာ ပြည်ပပို့ ရေထွက်ကုန် စုစုပေါင်းရဲ့ (၈၀) ရာနှုန်းလောက်ရှိတယ်” ဟု ပြောသည်။
ဧရာဝတီတိုင်း၏ ရေလုပ်ငန်းမှာ အဓိကအားဖြင့် တပိုင်တနိုင် ငါး၊ ပုစွန်ဖမ်းသူများက အများစု ဖြစ်ကြပြီး ၎င်းတို့ဖမ်းဆီးရမိသည့် ငါး၊ ပုစွန်များကို နီးစပ်ရာ အ၀ယ်ဒိုင်များသို့ သွားရောက်ရောင်း ချ အသက်မွေးကျောင်းပြုကြသူများဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ရေလုပ်သားများနှင့် မိသားစုများသည် ပြီးခဲ့သည့်မေ (၂) ရက်နှင့် (၃) ရက်တွင် တိုက်ခတ် ခဲ့သည့် နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကာလအတွင်း နေအိမ်၊ ပစ္စည်းဥစ္စာများသာမက လုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းကိရိယာများပါ ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ကြသောကြောင့် လက်ရှိအချိန်အထိ နိုင်ငံတကာနှင့် ပြည်တွင်း အလှူရှင်များ၏ လှူဒါန်းမှုများဖြင့်သာ နေထိုင်စားသောက်နေကြခြင်းဖြစ်သည်။
မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် ရေလုပ်သား (၁၇,၈၇၆) ဦးသေဆုံးပြီး (၉,၆၁၂) ဦး ပျောက်ဆုံးခဲ့ကြောင်း ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနက ကြေညာထားသည်။ ထို့အပြင် ရန်ကုန်တိုင်းနှင့် ဧရာဝတီတိုင်းရှိ ကမ်းဝေး
ငါးဖမ်းစက်လှေ၊ ဒေသခံ ကမ်းဝေးငါးဖမ်းစက်လှေ၊ ကမ်းနီးငါးဖမ်းစက်လှေ (စက်တပ်/စက်မဲ့) စုစုပေါင်း (၂,၀၈၈) စီး နစ်မြုပ်ခဲ့ပြီး ကမ်းနီး၊ ကမ်းဝေး ငါးဖမ်းကိရိယာ ကျပ်သိန်း (၂,၇၆၀) ဖိုး ဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။
အလားတူ ရန်ကုန်တိုင်းနှင့် ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်းရှိ ငါး၊ ပုစွန်၊ ကဏာန်းမွေးမြူရေးကန် စုစုပေါင်း (၃၈၇၁၆.၃၉) ဧက ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပြီ အအေးခန်းစက်ရုံများအနေဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်းတွင် စက်ရုံ (၅၀) နှင့် ဧရာဝတီတိုင်းတွင် စက်ရုံ (၅) ရုံ ပျက်စီးခဲ့သည်ဟုလည်း ဖော်ပြထားသည်။
အစိုးရ မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်းဘဏ်မှ မုန်တိုင်းဒဏ်သင့်သူများကို ငွေချေးပေးမည်ဟုဆိုသော် လည်း အများစုသည် စက်လှေနစ်မြုပ်သည့် ကုမ္ပဏီကြီးများသာ ရရှိကြောင်း အဆိုပါ အအေးခန်း လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်က ပြောသည်။
တနိုင်တပိုင် ငါးပုစွန်ဖမ်းနေသည့် အသေးစား ရေလုပ်သားမိသားစုအတွက် အခြေခံ လိုအပ်ချက် များဖြစ်သည့် လှေ၊ အင်ဂျင်၊ ငါးဖမ်းပိုက်များကို အစိုးရက အကြွေးစနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးမည် ဆိုသော်လည်း ယခုတိုင် တစီးတလေမှ ၎င်းတို့လက်ဝယ်ရောက်ရှိခြင်း မရှိသေးကြောင်း ဧရာဝတီ တိုင်းမှ ဒေသခံ ရေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ အများစုက ပြောသည်။
အစိုးရပိုင် သတင်းစာများတွင်မူ မုန်တိုင်းဒဏ်ခံရသည့် ရေလုပ်သားများအတွက် စက်မပါသည့် ငါးဖမ်းလှေတစီး ကျပ် (၂) သိန်း၊ စက်အပါ ကျပ် (၄) သိန်းကို လှူဒါန်းနိုင်ကြောင်း ကြေညာ ထားသည်။ ။
ယာဉ်ကြောမပိတ်ဆို့ရေး စီမံချက်ကြောင့် ယာဉ်ကြောများပိတ်ဆို့ခဲ့
ရန်ကုန်မြို့တွင်း ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု မဖြစ်စေရေး စီမံချက်သစ် စတင်ခဲ့မှုကြောင့် ယမန်နေ့၌ ခရီးသည်တင်ယာဉ်များ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့ကုန်ကာ နေ့တွက်မကိုက်ဖြစ်ကြရသည်ဟု သိရသည်။
မော်တော်ယာဉ်လိုင်းကားများကို ယာဉ်ကြောတကြောတည်း အသုံးပြုစေရန် ယာဉ်ထိန်းရဲများက ကြီးကြပ်လုပ်ဆောင်ခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း ခရီးသည်တင် ယာဉ်မောင်းများက ပြောသည်။
“မှတ်တိုင်မှာ ခရီးသည်စောင့်ပြီး တင်ရမှာ ရဲတွေရှိနေတော့ တင်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ ခရီးသည် က (၁၀) ဦးတက်မယ်ဆိုရင် (၃) ယောက်လောက်ပဲ ပြေးလွှားတက်ရတယ်။ ရပ်၊ တင်၊ ချ လုပ်တာ အချိန်ပိုမြန်ပေမယ့် ယာဉ်လိုင်းတွေအတွက် ယာဉ်ကြောတကြောစာပဲ ပေးထားတော့ ရှေ့ကားကို ကျော်တက်လို့လည်းမရဘူး။ တစီးနောက်ကနေ တစီးလိုက်နေရလို့ တနေ့ကို (၆) ကြောင်း (သွား၊ ပြန်) ဆွဲနေတဲ့ကားတွေ (၃) ကြောင်းအနိုင်နိုင်၊ ပိုက်ဆံကျတော့ အဆင်မပြေဘူးပေါ့” ဟု (၁၀၅) ဒိုင်နာကား မောင်းနှင်သူတဦးက ပြောသည်။
ယခုချမှတ်ဆောင်ရွက်နေသော ယာဉ်ကြော မကျပ်တည်းရေး စီမံချက်မှာ ရန်ကုန်တိုင်း တိုင်းမှူး အသစ်ဖြစ်သော အမှတ် (၇၇) တပ်မဌာချုပ် တပ်မမှူး ဗိုလ်ချုပ်ဝင်းမြင့် ရောက်ရှိပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ ချမှတ်သော စီမံချက်အသစ်ဖြစ်သည်ဟု ရန်ကုန် တိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ ကြိုးမဲ့ကြေးနန်းနှင့် ယာဉ်ထိန်းတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ တာဝန်ကျ ယာဉ်ထိန်းရဲတဦးက ပြောသည်။
“အခု ဒီစီမံချက်ကို စမ်းသပ်ကာလအဖြစ် ထားရှိဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်။ အောင်မြင်မှုရှိရင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
မော်တော်ယာဉ်လိုင်းကားများကို ယာဉ်ကြောတကြောတည်းမှာ အသုံးပြုစေရန် ကြီးကြပ်နေသော ယာဉ်ထိန်းရဲများမှာ ပန်းဆိုးတန်းမှတ်တိုင်မှ ကုန်ဈေးတန်း (သိမ်ကြီးဈေးမှတ်တိုင်) ထိရှိပြီး ယာဉ် များမှာလည်း ပန်းဆိုးတန်းကားမှတ်တိုင်မှ သိမ်ကြီးဈေးမှတ်တိုင်ထိ စီတန်းစောင့်ဆိုင်းနေရ သည်ဟု ခရီးသည်တဦးက ပြောသည်။
အချို့ယာဉ်လိုင်းများက သည်းမခံနိုင်၍ ကျော်တက်ပါက ထိုယာဉ်ကို နံပါတ်မှတ် အရေးယူရန် မှတ်သားဖမ်းဆီးအဖွဲ့ကလည်း လမ်းမ၏ တဖက်တွင် ရှိနေသည်ဟုလည်း ၎င်းက ပြောသည်။
ရန်ကုန်မြို့ မဟာဗန္ဓုလလမ်းတွင် နေထိုင်သူတဦးက ယခုတိုင်းမှူးအသစ် ချမှတ်သည့် စီမံချက် သစ်ကြောင့် လိုင်းကားများ ဒုက္ခရောက်ကုန်ကြောင်း၊ ယာဉ်ကြောကျပ်တည်းမှုကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန် လိုင်းကားစီးသူများနှင့် ဈေးသည်များကို စည်းကမ်းတကျ ကြပ်မတ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြောသည်။
၎င်းက “ရန်ကုန်မြို့တွင်း အ၀င်လမ်းတွေထဲက အနော်ရထာလမ်းနဲ့ မဟာဗန္ဓုလလမ်းတွေမှာ လိုင်းကားစီးသူများတယ်။ အဓိက ပန်းဆိုးတန်း မှတ်တိုင်ပေါ့။ အဲဒီမှတ်တိုင် ပလက်ဖောင်းမှာ ဈေးသည်တွေရှိတယ်။ ဈေးသည်တွေကြောင့် ခရီးသည်တွေက လမ်းပေါ်ကို ဆင်းပြီး ကား ရပ်စောင့်တယ်။ ကားတွေက ခရီးသည်တွေကို ရှောင်ရတယ်၊ တစီးနဲ့တစီး ကျော်တက်တယ်၊ ခရီးသည်ခေါ်တင်တယ်၊ ဒါကြောင့် ယာဉ်ကြောကျပ်တယ်။ အမှန်ဆိုရင် ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင် ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာ လူတွေ ကားစောင့်တဲ့အကျင့် လုပ်ပေးရမယ်။ ဈေးသည်တွေကိုလည်း အခြားနေရာ တခုခုမှာ စီစဉ်ပေးသင့်တယ်” ဟု ရှင်းပြသည်။
မုန်တိုင်းသင့်မြို့များ၌ အိမ်ငှားခ သိန်းချီဈေးကောင်းရနေ
ပီတာအောင်/ ၄ ဇူလိုင် ၂၀၀၈
နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ခံရသည့် ဧရာဝတီတိုင်း လပွတ္တာနှင့် ဘိုကလေးမြို့ပေါ်၌ အန်ဂျီအိုများက လေဘေးအကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရန် လာရောက်ငှားရမ်းနေထိုင်သဖြင့် လုံးချင်းအိမ်ငှားခများ သိန်းနှင့်ချီ၍ ဈေးကောင်းရနေကြောင်း ဒေသခံတို့က ပြောသည်။
လပွတ္တာမြို့ခံတဦးက “မြို့ပေါ်မှာ အန်ဂျီအိုတွေ နင်းကန်လာတဲ့အခါကျတော့ အိမ်တွေ တော်တော် များများ ငှားလိုက်ကြရတယ်။ ဈေးကောင်းပေးတယ်။ (၇) သိန်း၊ (၈) သိန်း၊ (၉) သိန်း၊ (၁၂) သိန်း အဲလောက်ထိပေးကြတယ်။ အိမ်သေးကျတော့ (၂) သိန်းတန်၊ (၄) သိန်းတန်စသဖြင့် ၀န်ထမ်းတွေ စုနေကြဖို့ အန်ဂျီအိုက ငှားပေးထားတယ်။ နဂိုက ဒီဈေး ဘယ်ရမလဲ၊ အန်ဂျီအိုတွေလာမှ ဈေး ကောင်းသွားတာ။ အရင်တုန်းကဆိုရင် လေးငါးခြောက်သောင်းဆို ရပြီ။ အခုသိန်းကျော်ဖြစ်သွားပြီ” ဟု ပြောသည်။
အိမ်ငှားနေသည့် အဖွဲ့အစည်းများတွင် German Agro Action၊ Save the Children၊ World Vision, UNDP စသည့် နိုင်ငံတကာ အန်ဂျီအိုများနှင့် ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီအချို့ ပါဝင်သည်။ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများ ကာလရှည် ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ရမည် ဖြစ်၍ ရုံးခန်းများ ဖွင့်လှစ်ရန်နှင့် နေထိုင်ရန် (၆) လ၊ (၁) နှစ် စသဖြင့် ငှားရမ်းနေကြခြင်းဖြစ်သည်။
အိမ်ငှားခများနည်းတူ တည်းခိုခန်းခများလည်း မူလက တနေ့လျှင် ကျပ် (၁,၀၀၀)၊ (၁, ၅၀၀) ရှိရာမှ အမျိုးအစားပေါ်လိုက်၍ ကျပ် (၂,၀၀၀) မှ (၄,၀၀၀) ထိ ဈေးတက်ကုန်ပြီး အနယ်နယ် အရပ်ရပ်မှ လာရောက်သည့် ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များဖြင့် ပြည့်နှက်နေကြောင်း၊ အရက်ဆိုင်နှင့် စားသောက် ဆိုင်များလည်း အရောင်းအ၀ယ်ကောင်းကြောင်း သိရသည်။
အလားတူ ဘိုကလေးမြို့ရှိ တတိယလမ်းနှင့် ဒုတိယလမ်းကဲ့သို့ မြို့၏ အချက်အချာကျသော နေရာများ၌ လုံးချင်းအိမ်ငှားခများ ဈေးကောင်းနေပြီး အိမ်အမျိုးအစားကိုလိုက်၍ တလလျှင် ကျပ်ငွေ (၄) သိန်းမှ (၁၀) သိန်းကျော်ထိ ဈေးကောင်းရနေသည်ဟု မြို့ခံတို့က ပြောသည်။
မြို့ပေါ်၌ အန်ဂျီအိုအဖွဲ့များ မှိုလိုပေါက်နေသော်လည်း မြို့ခံလူထုအနေဖြင့် အိမ်ပြန်ပြင်ရန် သွပ်တချပ်ပင် အကူအညီမရ ဖြစ်နေပြီး နေအိမ်များ ပြန်ပြင်မဆောက်နိုင် ဖြစ်နေကြရကြောင်း အခြားဘိုကလေးမြို့ခံတဦးက ပြောသည်။
မေလဆန်းက တိုက်ခတ်ခဲ့သည့် နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် ဘိုကလေးမြို့ပေါ်ရှိ လူနေအိမ် (၉၀) ရာခိုင်နှုန်းခန့် အမိုးလန်ကုန်ပြီး (၅၀) ရာခိုင်နှုန်းခန့် ထိခိုက်ပျက်စီးကာ (၂၀) ရာခိုင်နှုန်းခန့် ပြိုလဲသွားခဲ့သည်ဟု မြို့ခံအန်ဂျီအိုနှင့် နီးစပ်သူတဦးက ပြောသည်။
ဘိုကလေးမြို့သည် မြို့အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ကျေးရွာများမှ လယ်သမားများနှင့် အခြေခံလူ တန်းစားများကို အားပြု၍ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကား စီးပွားဖြစ်နေသည့်မြို့ဖြစ်ပြီး မုန်တိုင်းကြောင့် လယ်သမားများ အတိဒုက္ခရောက်ကုန်ကြသဖြင့် မြို့ပေါ်၌ စီးပွားရေး လည်ပတ်နိုင်ခြင်း မရှိတော့ဘဲ အရောင်းအ၀ယ် နည်းပါးလျက်ရှိသည်။
ဘိုကလေးမြို့ခံတဦးက “အရင်တုန်းက မြို့မှာ လုံးချင်းငှားနေတာ သိပ်မရှိကြပါဘူး။ အခန်း လောက်ပဲငှားနေကြတာ။ အိမ်ငှားခ အများဆုံး (၃) သောင်းလောက်ပဲရှိတာ။ အခု ငှားတယ်ဆိုတာ မုန်တိုင်းဒဏ်မထိတဲ့အိမ်တွေက အိမ်ပိုင်ရှင်တွေက လုပ်ငန်းပျက်၊ စီးပွားပျက်ဆိုတော့ သူတို့အိမ်ကို ပြန်ငှားစားတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဘိုကလေးမြို့ပေါ်မှာ အိမ်ငှားရတဲ့လူကလည်း လက်ချိုးရေလို့ ရပါတယ်။ အလုံး (၂၀) လောက်ပဲရှိတယ်” ဟု ပြောသည်။
နေအိမ်များကို ငှားစားသူတို့အနက် အချို့ဆွေမျိုးများနှင့် သွားနေကြပြီး အချို့က နေအိမ် နောက် ဖေး၌ပင် အဖီထိုးကာနေကြ၍ အချို့က ဈေးသက်သာသည့် အိမ်ငှားနေကာ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြ ကြောင်း သိရသည်။ ။
မြန်မာနိုင်ငံအား ငွေချေးမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး တရားသူကြီးများ ခုံသမာဓိဖွဲ့
NEJ/ ၄ ဇူလိုင် ၂၀၀၈
ထိုင်း သွင်းကုန်ထုတ်ကုန်ဘဏ်မှ မြန်မာနိုင်ငံကို ဘတ် (၄) ဘီလီယံ ချေးသည့်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး အမှုတင်သွင်းရေး၊ မတင်သွင်းရေးအတွက် ဆုံးဖြတ်ရန် တရားသူကြီး (၉) ဦးကို ယမန်နေ့က ရွေးချယ်လိုက်ကြောင်း ယနေ့ ဘန်ကောက်ပို့စ် သတင်းစာတွင် ဖော်ပြသည်။
နိုင်ငံတော်တရားရုံးချုပ်၏ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ ၀ီရတ် လင်ဝီချိုင်းက တရားသူကြီးများ ခုံသမာဓိအဖွဲ့ ဖွဲ့ရန်အတွက် ယမန်နေ့က တရားသူကြီး (၉) ဦးကို ရွေးချယ်ရန် တရားရုံးချုပ်အစည်းအဝေး
ခေါ်ယူခဲ့သည်။ ခုံသမာဓိအဖွဲ့တွင် ဒု-တရားရုံးချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ (၂) ဦး၊ တရားရုံးချုပ် ဌာနခွဲ အကြီး
အကဲ (၅) ဦးနှင့် ၀ါရင့်တရားရုံးချုပ် တရားသူကြီး (၂) ဦးတို့ ပါဝင်သည်။
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း တပ်ဆင် ရှင်နာဝါထရာအား ကိုယ်ကျိုးရှာမှု၊ အာဏာအလွဲသုံးစားလုပ်မှု တို့နှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုစစ်ဆေးရေးကော်မတီမှ တရားစွဲဆိုထားချက်ကို လက်ခံသင့်၊ မခံသင့် ဇူလိုင် (၃၀) ရက်တွင် ထိုခုံသမာဓိအဖွဲ့က ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်း အခြေခံဆက်သွယ်ရေး တိုးတက်မှုအတွက် မြန်မာအစိုးရကို သွင်းကုန်ထုတ်ကုန် ဘဏ်မှ ထိုင်းဘတ်ငွေ (၄) ဘီလီယံချေးငှားရန် တပ်ဆင်က ထောက်ခံပေးခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးတွင် အမှန်တကယ် အကျိုးအမြတ်ရသွားသူမှာ တပ်ဆင်ပိုင်သည့် တယ်လီကွမ်းလုပ်ငန်းပင် ဖြစ်သွား ကြောင်း ပိုင်ဆိုင်မှုစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့က စွဲဆိုထားသည်။
အမျိုးသားဆက်သွယ်ရေးစနစ် တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးအတွက် မြန်မာအစိုးရသည် ထိုင်းသွင်း ကုန် ထုတ်ကုန်ဘဏ်မှ ထိုငွေကို ချေးယူခဲ့ပြီး လိုအပ်သည့် ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများကို တပ်ဆင် မိသားစု အစုရှယ်ယာ အများဆုံးပိုင်သော ရှင်းဂြိုဟ်တု ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီမှ ၀ယ်ယူခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပိုင်ဆိုင်မှု စစ်ဆေးရေးကော်မတီက ဆိုထားသည်။
၂၀၀၄ ခုတွင် ထိုင်းအစိုးရပိုင် ထုတ်ကုန်သွင်းကုန်ဘဏ်မှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ငွေထုတ်ချေးခဲ့ခြင်းသည် ထိုအချိန်က ၀န်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူ တပ်ဆင်မိသားစုပိုင် ရှင်းဂြိုဟ်တု ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီအတွက် အကျိုးအမြတ် ရရှိစေရန် ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ၂၀၀၆ ခု စက်တင်ဘာတွင် ထိုင်းနိုင်ငံ၌ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းခဲ့ပြီးနောက် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် ပိုင်ဆိုင်မှု စစ်ဆေးရေးကော်မတီက ဆုံးဖြတ် ခဲ့သည်။
(၁၂) နှစ်ကြာ ငွေထုတ်ချေးမှုတွင် ထိုင်းနိုင်ငံထွက် ပစ္စည်းများ သုံးသည့် အစိုးရဆောက်လုပ် ရေးနှင့် ကြေးနန်းဆက်သွယ်ရေး စီမံကိန်းများ ပါဝင်ပြီး (၅) နှစ်အထိ နှစ်ပတ်လည်အတိုးနှုန်း (၃) ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ပေးဆပ်ရန်လည်း ခွင့်ပြုထားသည်။
ငွေထုတ်ချေးမှုသည် ထိုင်းစစ်အစိုးရ အာဏာသိမ်းချိန်တွင် ဆိုင်းငံ့သွားပြီး ယခု တပ်ဆင်၏ မဟာမိတ်ဖြစ်သူ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဆမတ် ဆန်ဒါရာဝပ်က မြန်မာစစ်အစိုးရအား ချေးရန် ကျန်ရှိသည့်ငွေများကို ဆက်လက်ထုတ်ချေးရန် ပြီးခဲ့သည့် မတ်လအတွင်း၌ ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
တပ်ဆင်သည် ချေးငွေကိစ္စကို မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်များနှင့် တရားမ၀င် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း၍ ငွေချေးရန် ကတိပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ချေးငွေပမာဏကိုလည်း တိုးပေးခဲ့ကာ အစိုးရ၏ ထောက်ခံ ချက်မပါဘဲ အတိုးနှုန်းကို လျှော့ချခဲ့ကြောင်း ကော်မရှင်က စုံစမ်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ။
တရုတ်နှင့် ထိုင်ဝမ် တိုက်ရိုက်လေကြောင်းလိုင်း စတင်ပြေးဆွဲ
Agencies / ၄ ဇူလိုင် ၂၀၀၈
နှစ်ပေါင်း (၆၀) ခန့်အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ခရီးသည် (၂၅၈) ဦးပါသော တရုတ်နိုင်ငံမှ တိုက်ရိုက်ပျံသန်းသည့် လေယာဉ် (၁) စီး ထိုင်ဝမ်သို့ ယနေ့ဆိုက်ရောက်သည်။
The China Southern Airlines (CSA) မှ အေ-၃၃၀ လေယာဉ်သည် တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်မြို့တော် ဂွမ်ဂျိုးမှ ယနေ့နံနက် ဒေသစံချိန် (၆း၃၁) ၌ ထွက်ခွာခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း မိနစ် (၁၀၀) ခန့်အကြာ၌ ထိုင်ဝမ်ရှိ Taipei Taoyuan လေဆိပ်သို့ ဒေသစံချိန် နံနက် (၈) နာရီ ကျော်တွင် ဆိုက်ရောက်သည်။
တရုတ်လေဆိပ်မှ ထွက်ခွာစဉ်နှင့် ထိုင်ဝမ်လေဆိပ်သို့ ဆိုက်ကပ်စဉ်တွင် လေယာဉ်မောင်းနှင်သည့်ူ အဆိုပါ လေကြောင်းလိုင်း ဥက္ကဋ္ဌ လီရှောင်ယောင်းက ယခုခရီးစဉ်သည် ရေလက်ကြားကို ဖြတ် သန်းမောင်းနှင်ရသော သေးငယ်သည့် ခရီးစဉ်ဖြစ်သော်လည်း တရုတ်-ထိုင်ဝမ် ဆက်ဆံရေး အတွက်မူ ထူးခြားအရေးပါကြောင်း ပြောသည်။
၎င်းက “အရင်တုန်းက တိုင်ဝမ်နဲ့ တရုတ်ဟာ မိသားစုတခုတည်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သမိုင်းအဖြစ် အပျက်တွေကြောင့် ကျနော်တို့ ကွဲသွားကြရတာပါ။ ဒါကြောင့် ကျနော့်အနေနဲ့ ကိုယ့်အိမ်ကို လာရသလိုပဲ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ခံစားရပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
၁၉၄၉ ခုနှစ်အတွင်း တရုတ်ပြည်၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့် ထိုင်ဝမ်နှင့် တရုတ်ပြည်မ ဟူ၍ ကွဲထွက်သွားခဲ့ချိန်မှစပြီး နှစ်ဖက်ခရီးသွားများအား အထူးအားလပ်ရက် အနည်းငယ်မှလွဲ၍ တိုက်ရိုက်သွားလာခွင့် ပိတ်ပင်ခံထားခဲ့သည်။ ယခင်က တရုတ်ပြည်မှ ခရီးသည်များသည် ဟောင် ကောင် (သို့) မကာအိုမှတဆင့် ထိုင်ဝမ်သို့ လာရသည်။
ယခုနှစ်မတ်လတွင် ရွေးကောက်ပွဲမှ ထိုင်ဝမ်သမ္မတဖြစ်လာသူ မာရင်ဂျောင်းအစိုးရနှင့် တရုတ် အစိုးရအကြား ယခင်လ၌ နှစ်ဖက်အကြား တိုက်ရိုက်လေကြောင်း ပုံမှန်ပျံသန်းရေး၊ ပြည်မ ခရီးသည် (၃,၀၀၀) ခန့် ထိုင်ဝမ်သို့ နေ့စဉ် လာရောက်လည်ပတ်နိုင်ရေး သဘောတူခဲ့ပြီးနောက် ယနေ့ခရီးစဉ်သည် ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ လေကြောင်းခရီးစဉ်နှင့် ထိုင်ဝမ်သို့ လိုက်ပါလာသူ တရုတ်နိုင်ငံ ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ် ရှန်ဇန် မြို့ခံတဦးက “တရုတ်ပြည်မက မျိုးဆက်တိုင်းဟာ ထိုင်ဝမ်ကို သွားလည်ချင်ခဲ့ကြတာပါ။ ဘာဖြစ် လို့လဲဆိုတော့ အဲဒီကျွန်းအကြောင်းကို ကျနော်တို့ အများကြီး ဖတ်ခဲ့ဖူး၊ ကြားခဲ့ဖူးလို့ပဲလေ” ဟု ပြောသည်။
တရုတ်-ထိုင်ဝမ်အကြား ယခုကဲ့သို့ တိုက်ရိုက် လေကြောင်းပျံသန်းမှုကြောင့် ထိုင်ဝမ်ခရီးသွား လုပ်ငန်းကိုလည်း အကျိုးအမြတ် ရရှိစေမည်ဖြစ်ကြောင်း ထိုင်ဝမ်ရှိ တတိယအကြီးဆုံး ခရီးသွား လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် Phoenix Tours International Inc ဥက္ကဋ္ဌ အန်ထော်နီ လီအိုက ပြောသည်။
ယခင်လ နှစ်ဖက်အစိုးရ သဘောတူညီမှုများကို အခြေခံ၍ တရုတ်အခြေစိုက် လေကြာင်းကုမ္ပဏီ (၆) ခုနှင့် ထိုင်ဝမ်အခြေစိုက် လေကြာင်းကုမ္ပဏီ (၅) ခုတို့က အပတ်စဉ် တနင်္လာမှ သောကြာရက် များအကြား အသွားအပြန်ခရီး (၃၆) ကြောင်း ပျံသန်းမည်ဖြစ်သည်။
တရုတ်ပြည် ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်မှ ထိုင်ဝမ်သို့ တိုက်ရိုက်လေယာဉ်တစီး ရောက်ရှိသကဲ့သို့ ထိုင်ဝမ်
ပိုင် China Airlines လေကြောင်းလိုင်းပိုင် လေယာဉ်တစီးလည်း ခရီးသည် (၃၀၀) ကျော် တင် ဆောင်၍ တရုတ်နိုင်ငံ ရှန်ဟိုင်းမြို့သို့ ပထမဆုံး တိုက်ရိုက်ခရီးစဉ်အဖြစ် ယနေ့နံနက်တွင် ထွက်ခွာ သွားခဲ့သည်။ ။
ကျန်ဓားစာခံတွေ လွတ်မြောက်ရေး ဆက်ကြိုးပမ်းဖို့ အင်းဂရစ် ဘီတန်ကုတ် တိုက်တွန်း
04 July 2008 အင်းဂရစ် ဘီတန်ကုတ်ကို သူမ၏ သားသမီးများနှင့်အတူတွေ့ရစဉ်။
ဇူလိုင် ၃၊ ၂၀၀၈။
ကိုလံဘီယာ သူပုန်တွေလက်ထဲမှာ ရှိနေသေးတဲ့တခြားဓားစာခံတွေ ပြန်လွတ်မြောက်ရေးကြိုးပမ်းမှုအသစ်တွေ လုပ်ဆောင်ဖို့ အင်းဂရစ်
ဘီတန်ကုတ် (Ingrid Betancourt) က သူလွတ်မြောက်လာပြီး တရက်အကြာမှာတိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ သူဟာ ဗုဒ္ဓဟူး
နေ့က လွတ်မြောက်လာခဲ့သူ ၁၅ ဦးထဲမှာ တဦးအပါအ၀င်ပါ။ ဒီအကြောင်း ဗွီအိုအေသတင်းထောက် ဘရိုင်ယန် ၀ဂ္ဂနာ (Brian Wagner)
သတင်းပေးပို့ထားတာကို ကိုကျော်အောင်လွင်က တင်ပြပေးထားပါတယ်။
သမ္မတလောင်းအဖြစ် ၀င်ရွေးခဲ့တဲ့ အင်းဂရစ် ဘီတန်ကုတ်ဟာ ကိုလံဘီယာသူပုန်တွေ
ရဲ့ ဖမ်းဆီးတာကို ၆ နှစ်ကျော် ခံခဲ့ရပြီး အခု သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါး
ပြန်ဆုံတွေ့နေပါပြီ။ ဒါပေမယ့်လည်း FARC လို့ခေါ်တဲ့ ကိုလံဘီယာ တောတွင်း
လက်နက်ကိုင် သူပုန်စခန်းတွေမှာ အဖမ်းခံထားရတဲ့ ဓားစာခံတွေ ဒါဇင်နဲ့ချီပြီး
ကျန်နေသေးတယ်လို့ အင်းဂရစ် ဘီတန်ကုတ်က ပြောပါတယ်။ အခုဆိုရင် FARC
လက်ဝဲသူပုန်တွေဟာ အင်အားချိနဲ့တဲ့ အခြေအနေမှာရှိနေပြီး ကိုလံဘီယာအစိုးရ
အနေနဲ့ ၄၄ နှစ်ကျော်ကြာ ပဋိပက္ခဖြစ်နေတဲ့ သူပုန်တွေကို အဆုံးသတ်ဖို့ ညှိနှိုင်း
ဆောင်ရွက်မှုတွေ လုပ်သင့်တယ်လို့လည်း ဘီတန်ကုတ်က ဆိုပါတယ်။
“ကြားကနေ၀င်ပြီး ဖြန်ဖြေစေ့စပ်ပေးကြမယ့်သူတွေက သူပုန်ခေါင်းဆောင်တွေကို
သူတို့ရဲ့ အားကောင်းတဲ့ စွဲဆောင်မှုတွေကို အသုံးချပြီး အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်တွေကို
အဆုံးသတ်ဖို့၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးလမ်းကြောင်းကို တက်ကြဖို့
အင်းဂရစ် ဘီတန်ကုတ်ဟာ ကိုလံဘီယာနဲ့ ပြင်သစ် နှစ်နိုင်ငံသား ခံယူထားသူပါ။
အခုလို ဓားစာခံတွေ လွတ်မြောက်ဖို့အတွက် သူပုန်တွေကို ဖိအားပေးပြီး ဆောင်ရွက်
ခဲ့တဲ့ ပြင်သစ်အစိုးရကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောပါတယ်။ ကမ္ဘာတ၀ှမ်းက ပဋိပက္ခ
တွေမှာ ဓားစာခံအဖြစ် အဖမ်းခံနေရသူတွေ ပြန်လွတ်လာရေးအတွက် ကိုလံဘီယာ၊
ပြင်သစ်နဲ့ တခြားနိုင်ငံတွေ ပူးပေါင်းပြီး နိုင်ငံစုံအဖွဲ့တခု ဖွဲ့သင့်တယ်လို့လည်း
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နှောင်းပိုင်းကတော့ ကိုလံဘီယာသမ္မတ အယ်လ်ဗားဒိုး အူရီဘီ (Alvaro
Uribe) က သူပုန်တွေလက်ထဲကနေ ဓားစာခံတွေအားလုံး မကြာခင်မှာ လွတ်မြောက်
လာဖို့ သူမျှော်လင့်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အင်းဂရစ် ဘီတန်ကုတ် အပါအ၀င် ဓားစာခံ
၁၅ ယောက် လုံခြုံစိတ်ချရပြီး သူတို့ပြန်လွတ်ရေး ကြိုးပမ်းခဲ့ကြတဲ့ ကိုလံဘီယာ
တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့တွေကို ဂုဏ်ပြုချီးမွမ်းခဲ့ပါတယ်။
“ဒီစစ်ဆင်ရေးဟာ တကယ့်ကို ဂုဏ်ယူစရာပါပဲ။ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအတွက် တကယ့်ကို
ထူးချွန်တဲ့ အောင်မြင်မှုပါပဲ။ လူ့အခွင့်အရေးအတွက်လည်း လေးစားဂုဏ်ယူလောက်
ပါတယ်” လို့ ပြောသွားတာပါ။
စစ်ဆင်ရေးမှာ ကိုလံဘီယာရဲနဲ့ စစ်သား ၁၁ ယောက်၊ အမေရိကန် ကာကွယ်ရေး
ကန်ထရိုက်တာ ၃ ယောက်တို့ကို ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန် ၃ ယောက်ဟာ
၂၀၀၃ ခုနှစ်တုန်းက မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ထောက်လှမ်းမှုတွေ
လုပ်နေတုန်း ရဟတ်ယာဉ်ပျက်ကျပြီး သူပုန်တွေဖမ်းဆီးတာကို ခံခဲ့ရသူတွေပါ။ အခု
သူတို့အားလုံးလည်း မိသားစုဆီ ပြန်ရောက်နေကြပါပြီ။
ဓားစာခံတွေကို အောင်အောင်မြင်မြင် ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် ကိုလံဘီယာအစိုးရ
ရဲ့ ဆောင်ရွက်မှုကို အမေရိကန်သမ္မတ ဘုရှ် (Bush) ကလည်း ချီးကျူးလိုက်ပါတယ်။
“ကိုလံဘီယာသမ္မတကို ကျနော် ဂုဏ်ယူချီးကျူးပါတယ်။ ဒီစီမံကိန်းကိုချခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့
တပ်ဖွဲ့တွေကိုလည်း ဂုဏ်ယူချီးကျူးကြောင်း ပြောလိုက်ပါတယ်။ သေသေချာချာ အစီ
အစဉ်ချပြီး ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့လို့ အခုလွတ်မြောက်လာကြပြီး သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေနဲ့
အတူရှိနေကြတဲ့အဖြစ်ဟာ သိပ်ကို ပျော်ရွှင်စရာဖြစ်ရပ်ပဲလို့လည်း ကိုလံဘီယာသမ္မတ
ကို ပြောခဲ့ပါတယ်လို့” သမ္မတ ဘုရ်ှက ပြောခဲ့တာပါ။
ကိုလံဘီယာမှာရှိတဲ့ အမေရိကန်သံအမတ် ၀ီလျံ ဘရောင်းန်ဖီလ်း (William Brownfield)
ကလည်း လွတ်မြောက်လာတဲ့ အမေရိကန်သုံးယောက်ကို ကယ်ထုတ်လာပြီး မကြာခင်
မှာပဲ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ သူတို့သုံးယောက်ထဲက နှစ်ယောက်ဟာ အရေပြားနဲ့ပတ်သက်
တဲ့ ရောဂါဝေဒနာတွေ ခံစားနေရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
လေဘေးဒဏ်ခံ မြန်မာလူထုအတွက် ကူညီကယ်ဆယ်ရေး ရန်ပုံငွေ ပြတ်လတ်မှုများရှိနေ
မြန်မာနိုင်ငံ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသကို နာဂစ်ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်း ကျရောက်ခဲ့
တာ အခုဆို နှစ်လပြည့်သွားပါပြီ။ ပြည်တွင်းရော ပြည်ပကပါ မုန်တိုင်း
ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကို အားသွန်ခွန်စိုက်
လုပ်ခဲ့ကြလို့ ကူညီရေးလုပ်ငန်းတွေ အချို့ အောင်အောင်မြင်မြင်ရှိခဲ့တယ်
ဆိုပေမယ့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်တော့ လအတန်ကြာ အချိန်ယူရဦး
မှာဖြစ်ပြီး ဒီအတွက် ရန်ပုံငွေပြတ်လတ်မှုတွေ ရှိနေတယ်လို့ အဓိက
အထောက်အပံ့တွေ ကူညီပေးနေတဲ့ WFP ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့က သတိ
ပေးခဲ့ပါတယ်။ WFP ကနေ အခု နာဂစ်အလွန် နှစ်လအခြေအနေ ဘယ်လို
များ သုံးသပ်ထားပါသလဲဆိုတာ စုံစမ်းမေးမြန်းပြီး ကိုသားညွန့်ဦးက တင်ပြ
နာဂစ်မုန်တိုင်းကျရောက်ခဲ့တာ အခု နှစ်လကြာပြီဆိုပေမယ့် အပျက်အစီး
အတော်များများကတော့ ရှိနေဆဲပဲလို့ WFP ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့ကြီးက
သုံးသပ်ထားပါတယ်။ မိုးရာသီရောက်လာတာနဲ့အမျှ လယ်မြေဧက အတော်
များများ ရေလွှမ်းခံထားရတာမို့ သုံးမရဖြစ်နေတာကြောင့် စာနပ်ရိက္ခာ
အထောက်အပံ့တွေ လုပ်အပ်နေတုန်းပဲလို့လည်း တွက်ဆထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မိုးတွင်းကျရောက်တာကြောင့် ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေလည်း
စိုးရိမ်စရာဖြစ်လာတယ်လို့ WFP နယူးယောက်ခ်ရုံး ပြောခွင့်ရသူ ဘက်တင်
လူရှာ (Bettin Luescher) က ဗွီအိုအေကို အခုလို ပြောပြပါတယ်။
“နေရာအတော်များများကို ရဟတ်ယာဉ်တွေ ကုန်တင်တုန်ကင်းတွေနဲ့ပဲ
သွားလာလို့ရပါတယ်။ ဒီ တုန်ကင်းတွေ မော်တော်တွေနဲ့ စားစရာတွေ
အထောက်အပံ့တွေကို ပို့ပေးနေပါတယ်။ စိုးရိမ်ရတဲ့ အခြေအနေကတော့
ကူးစက်ရောဂါတွေ ဖြစ်လာမယ့်ကိစ္စပါ။ အခု မိုးတွင်း မိုးရွာသွန်းတာက
အိုးအိမ်မဲ့ဖြစ်နေသူတွေ၊ နောက် သူတို့မှာကျန်ရှိတဲ့ အစားအစာတွေကို
ထိခိုက်တာတွေရှိတဲ့အပေါ် အခြားကူးစက်ရောဂါတွေဖြစ်လာမှာ စိုးရိမ်ရပါ
အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကို အတော်အတန် ဆောင်ရွက်ပြီးစီး
ခဲ့ပြီဆိုပေမယ့် လာမယ့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းတွေအတွက် ပိုပြီး
ငွေကြေးကုန်ကျမယ်၊ ပိုပြီးတော့ အချိန်ယူရမယ်လို့လည်း WFP က တွက်ဆ
ထားပါတယ်။ မုန်တိုင်းသင့် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသဟာ လယ်ယာလုပ်ငန်းတွေ
ကို အားထားရတာဖြစ်ပြီး အခုအခြေအနေမှာ လယ်သမားတွေကိုယ်တိုင်
စိုက်ပျိုးရေးအခက်အခဲတွေ ကြုံနေရဆဲရှိတယ်လို့ WFP ပြောခွင့်ရသူက
“ဒုက္ခသည်တွေ ပြန်ပြီး နလန်ထူနိုင်ဖို့ဆိုရင် လအတန်ကြာ အချိန်ယူရဦးမှာပါ။
အခု အခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် စိုက်ပျိုးရာသီ ရောက်နေပါပြီ။
လယ်သမားတွေ အတော်များများမှာ မျိုးစပါးတွေ၊ သိုလှောင်ထားတဲ့ အစား
အစာတွေ မရှိတော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် လာမယ့်လတွေအတွင်းမှာ ကျမတို့ရဲ့
လယ်သမားတွေအတွက် မျိုးစပါးထုတ်ပေးတာတွေ၊ လယ်ထွန်ဖို့ လက်ထွန်
စက်တွေ ထုတ်ပေးတာတွေကို ကူညီရေးအဖွဲ့ အာဏာပိုင်တွေက လုပ်ပေး
နေပေမယ့် တကယ်တမ်း မျိုးစပါး အလုံအလောက်မရတာ၊ လယ်ထွန်ဖို့လည်း
ဒီဇယ်ဆီ မလုံလောက်တာတွေရှိနေပြီး အချို့လယ်မြေတွေကတော့ သုံးမရ
အောင် ရေလွှမ်းခံနေရတယ်လို့ အဲဒီဒေသကို ရောက်ခဲ့သူတွေက ဗွီအိုအေကို
ပြောထားပါတယ်။ တဖက်မှာလည်း ကူညီရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် ကုလ
သမဂ္ဂကိုယ်တိုင်က ငွေကြေးအခက်အခဲတွေ ရှိနေပြီး ကုလသမဂ္ဂဘက်က
အရင် နိုင်ငံတကာကို မေတ္တာရပ်ခံထားတဲ့ ငွေကြေးတောင် အပြည့်အ၀ မရခဲ့
ပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း အခု ဒီလအတွင်းမှာလုပ်မယ့် ဒုတိယအကြိမ် နိုင်ငံ
တကာညီလာခံ ကျင်းပစဉ်အတွင်းမှာ ကုလသမဂ္ဂရော နိုင်ငံတကာ အန်န်ဂျီ
အိုတွေကပါ လိုအပ်ချက်တွေကို နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကို ထပ်မံတောင်းခံဖို့
ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ WFP ရဲ့ ပြောခွင့်ရအမျိုးသမီးက
“အခုလာမယ့် ဇူလိုင်လုပ်မယ့် နိုင်ငံတကာညီလာခံမှာ ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့
ဒီအတွက် ရန်ပုံငွေတွေကို တောင်းခံဖို့ရှိပါတယ်။ အခြေအနေတွေ ပြန်လည်
ထူထောင်နိုင်ဖို့ လပေါင်းအတော်ကြာ လိုနေသေးတာမို့ ဒီအကူအညီလုပ်ငန်း
တွေအတွက် ရန်ပုံငွေတွေက တော်တော်အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါကြောင့်
လာမယ့်ရက်အတွင်းမှာပဲ နိုင်ငံတကာ အန်န်ဂျီအိုတွေရော ဒီအစည်းအဝေး
မှာတက်ပြီး ရန်ပုံငွေကြေးရရှိရေးအတွက် ပြောဆိုဖို့ရှိပါတယ်။”
ဒီလို အခက်အခဲတွေကြားမှာပဲ WFP အနေနဲ့ကတော့ သူတို့တတ်နိုင်သ
လောက် ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လအတွင်း လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာတွေ ရှိပါတယ်လို့တော့
ပြောခွင့်ရသူ ဘက်တင် လူရှာက ဗွီအိုအေကို အခုလို ရှင်းပြပါတယ်။
“အရေးသိပ်ကြီးတဲ့အချက်ကတော့ ကျမတို့အနေနဲ့ နိုင်ငံတကာဝန်ထမ်းတွေ
ကို မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်အောင် လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မုန်တိုင်းဒဏ် အဆိုး
ဆုံးခံလိုက်ရတဲ့ ဒေသတွေက လူဦးရေ ၇၃၀,၀၀၀ လောက်ကို အစားအစာ
တွေ ပို့ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ လာမယ့်လတွေအတွင်းမှာ ဒီထက်ပိုပြီး လုပ်ဆောင်
ဒါပေမယ့် အခု မုန်တိုင်းဒဏ်ခံထားရတဲ့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသဟာ သွားရေး
လာရေး အခက်အခဲရှိနေပြီး ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ မော်တော်တွေ၊ ရဟတ်
ယာဉ်တွေကိုတောင် ဆက်ငှားရမ်းဖို့ အခက်ကြုံနေရပြီလို့ ပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်း
ကပဲ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခု သူတို့လုပ်နေရတဲ့ ကယ်ဆယ်ရေး
လုပ်ငန်းဟာ အခြား ကုန်တင်ထရတ်ကားတွေနဲ့ အကူအညီ အထောက်အပံ့
တွေ ပို့ပေးရတဲ့ လုပ်ငန်းတွေထက် ပိုပြီး ရှုပ်ထွေးမှုရှိတယ်လို့လည်း WFP